လုလု နှင့် မျှစ်ကြော် အာလူးဖုတ်ခန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Buddhism » လုလု နှင့် မျှစ်ကြော် အာလူးဖုတ်ခန်း	90
လုလု နှင့် မျှစ်ကြော် အာလူးဖုတ်ခန်း
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Jun 14, 2016 in Buddhism, Science & Religion | 90 comments
လုလု – ဒါနဲ့ အစ်မ တခုလောက်မေးလို့ ရလား
မျှစ်ကြော် – မေးပါ
လု – ဟို ရှေ့ တွေမှာ အစ်မ တင်ထားတဲ့ပို့ တွေက ဘာသာရေးကိုတမျိုးမြင်ထားသလို ဘုန်းကြီးတချို့ ကို တခုခုပြောချင်တာလားလို့ 
သေချာတော့မသိပါဘူး စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်နေလို့ 
မျှစ် – မဟုတ်ဘူး လုလု။ ဘာသာရေးက အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်နေတယ်။
ကာလာမသုတ် ဘယ်လိုပဲ ရေးရေး၊ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်က အထိမခံဘူး
လု – အာဏာရှင်ဆန်တဲ့စည်းရုံးသူတွေကြောင့်လို့ မထင်ဘူးလား
မျှစ် – မဟုတ်။ မိရိုးဖလာ အတွေးအခေါ်။ ငရဲနဲ့ ကိုင်ပေါက်ထားတယ်
လု – အင်း
မျှစ် – ဥပမာ တစ်ခုပဲ ပြောမယ်။ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ဗြဟ္မာ့ ပြည်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်းအဖြစ် ရေးပြီး လူသားဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးကို ပြောထားတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ လူသားဘ၀ရဲ့ ဒုက္ခသစ္စာကို ပုံကြီးချဲ့ထားတယ်
အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို ဟိုဘက်ဒီဘက် နှစ်ဖက် ညှပ်ပြီး ပြန်လှန်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်ကို သတ်ထားတဲ့ပုံ။
လု – ဟုတ်၊ အဖန်ငါးရာတို့ လား
မျှစ် – လူသားဘ၀ရဲ့ ဆိုးရွားမှု။ မာန်မာန လျှော့ချသင့်ပုံ။ ဒီနည်းနဲ့ လူသားရဲ့ ဖြစ်တည်မှု တန်ဖိုးကို အဆုံးစွန် ထိ ချပစ်လိုက်တယ်။ ဒီအခါမှာ လူသားဟာ သေခါနီးခံစားရမယ့် ဝေဒနာတို့ ဘာတို့ နဲ့ သေပြီး လားရမယ့် ဂတိတို့ ဘာတို့နဲ့ မလှုပ်သာတော့ဘူး။
လု – ဘုရားဟောတာ ရှင်းရှင်းလေးကို ရှုပ်အောင်လုပ်ထားတာ မိရိုးဖလာတွေလေ
မျှစ် – လူသားရဲ့ တန်ဖိုးကို ချထားလိုက်တော့ လူ့အခွင့်အရေးမှာ ဒီမို မဟုတ်တော့ဘူး
ဘုရားဟောက ဓမ္မစကြာနဲ့ အနတ္တလက်ခဏာသုတ်နဲ့တင် ဗုဒ်ဓဘာသာဖြစ်တယ်
လူတစ်ယောက် ကို ကြောက်စိတ် မတ၇ားဝင်သွားစေပြီး လူသားမာန်မာန လူသားဂုဏ်ကို အညွန့်သတ်လိုက်တာ
မဘသ ကိုပြောတာမဟုတ်။ တိုင်းပြည်မှာ လူတွေ အားလုံးနီးပါး လက်ခံထားတဲ့ ဘာသာရေးသဘာတရားကိုက အတွေးအခေါ်ကို ဆန့်ကျင်တယ်။
လူတစ်ယောက် သေရင် ဒီလောက်ကြောက်စရာ မကောင်းပါဘူး။ အာရုံကြော နာဗ်ကြောစနစ်တွေ အလိုလို ထုံထိုင်းသွားတယ်။ ဥပမာ အရွယ်ရောက်ကာစတွေ အာရုံလန်းတယ်။ ထတယ် ရွတယ်။ အသက်ရရင် ဘယ်လိုမှ မထတော့ဘူး။ အဲသဘောပဲ။ အသက်ရလာလေ ကင်ဆာလို နာဗ်ကြောတွေကို ဆွဲချုပ်ပြီး ဝေဒနာပေးတဲ့ ရောဂါကိုတောင် ဝေဒနာ ခံစားရမှု လျော့ကျလာပါတယ်။
အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ အိပ်ပျော်နေရင်းလည်း အသက်ထွက်သွားတတ်တာပါပဲ။ ခုတင်ထက် မျောနေရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် တွန့်သွားပေမယ့် အာရုံကြောစနစ်က အလိုလို ထိုင်းသွားပြီး မချိမဆံ့ ဆိုတာ မခံရပါဘူး။ ဒါကြီးကို မပြောဘဲ သေခြင်းကို အရမ်းကြောက်အောင် တရားပြထားပြီး လူ့စိတ်ကို နှိပ်ကွပ်ထားတယ်
သေရင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကသာ ပါမယ်ပြောတယ်။ ပြီးတော့ တစ်သက်လုံး ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် သေခါနီး အသေမတတ်ရင် အပါယ်လားတာပဲ ဖြစ်ရပြန်ရော။ ရှေ့စကား နောက်စကား မညီဘူး။ လူ့ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ သတ္တိကို သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဗုဒ်ဒဘာသာဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။
ဗုဒ်ဓဘာသာဟာ အစစ်အမှန်ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ နိဗာန် မရောက်ပါဘူး။ အပေါ်က အကာတွေကို ဖယ်မချနိုင်ရင် ဒီဘာသာလည်း သက်ဆိုးမရှည်နိုင်ပါဘူး။ မွတ်စလင်နဲ့ ဘာမှ သိပ်မကွာဘူး
ဘာသာက သက်ဆိုးမရှည်ဘဲနဲ့ အတုအယောင်က သက်ဆိုးရှည်ပြီး အာဏာရှင်စနစ် ပါ သက်ဆိုးရှည်သွားမှာ
လု – လူတွေကသေမှာတော့ကြောက်ကြတာပဲ ဒါပေမယ့် ဘဝ တွေကိုလည်းထပ်လိုချင်ကြတယ်
ဘဝရ ရင်တော့ သေတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းဘူးသေနာ သေကံရောက်ရင် သေရမှာပဲ
ဘယ်လို နည်းနဲ့ အသေသက်သာအောင်လုပ်မလဲဆ်ိုတာကိုပဲ သိဖို့ လိုတာ အဲဒါမသိရင်တော့ ကြောက်စရာကြီးပဲ ဘာလို့ ဆို ကိုယ့်အတွက်ဘာမှ ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးလေ
လုလု ခံယူထားတော့ရိုးရှင်းပါတယ် ဘဝကိုအတတ်နိုင်ဆုံး မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့အသက်ရှင်သွားဖို့ ပဲ နောက်တခု က အရာအားလုံးကိုစွန့် လွတ်တတ်ဖို့စွန့် လွှတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမယ် အနည်းဆုံးသောတပန် အဆင့်ကိုတော့ ရောက်အောင် အားထုတ်သွားဖို့ပဲ်
မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးငါထင် နေတဲ့ ဘဝကို အတတ်နိုင်ဆုံး စွန့် လွှတ်နိုင်ရမယ်။ အကောင်းဆုံးဘာသာကို ရယူပြီးနောက်တော့ ဘယ်ဘာသာက ဘယ်လို ဘာ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး သိပ်မပြောချင်တော့ဘူး မြန်မာ တွေရဲ့ မိရိုးဖလာ အယူ တွေကိုတော့ သီးခံ ရတာပေါ့ ချွတ်ဖို့ မလွယ်တာ။
ဘုရားကဟောထားပြီးသားပါ လူ့ ဘဝ ကို အကောင်းရောအဆိုးရော ၂ခုလုံးမြင်တယ် လို့ခန္ဓာရှိလို့ ဒုက္ခသစ္စာ ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်ချင်သလောက်လုပ်နိုင်တယ် လူ့ ဘဝ ပဲ ဘုရားဖြစ်နိုင်တယ် ဒါက အကောင်းမြင်တာ ဒါပါပဲ လူ့ ဘဝဆိုတာ ကောင်းတာတွေ လုပ်ဖို့ ပဲ။
မျှစ် – လူများစု ဒီလိုတွေးကြပါတယ်။ လက်တုန့်ပြန်တာမျိုး။ အမှားနဲ့အမှန် ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြားတာမျိုးထက် ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ကိုယ့်ထံလာ ဆိုတာမျိုး။ ဒါကြောင့်ပဲ ခုပဲကြည့်လေ ။ ဒီအစိုးရ ဘာမှ မဖြစ်စေရဘူး။ အရင်လူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ခတ်မယ် ။ လက်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုး။ ဘယ်သူမှ လက်သင့်မခံဘူး။ ဒီတော့ အရိုးအရင်းက အရိုးအရင်းပဲပေါ့။ အဲဒါ ဘာသာရေးက ကြပ်ပေးလိုက်တဲ့ စနစ်။
လု – လက်တုန့် ပြန်တဲ့စနစ် မရှိတာကောင်းပါတယ်
ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းခံစားကြရတာပဲ ဒါတော့ ရှောင်လွဲလို့မရဘူး
မျှစ် – နိုင်ငံရေးထဲမှာ အဲဒီ ဘာသာရေးသဘော ၀င်လာတာ သွားတာပဲကွယ်။ တရုတ်ပြည်မှာတောင် နို့မှုန့်ထဲ မယ်လမင်း ပါလို့ တာဝန်ရှိသူကို သေဒဏ်ချတယ်။ နောင် ကျဉ်အောင်။ ထပ်မဖြစ်အောင်။ အခုက ဒီလောက် ယုတ်မာခဲ့တာတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ မထိရဲတာရော ဘာသာရေးက ကြပ်ပေးလိုက်တာရော။ ဒါကြောင့်မို့ နောင် ထပ်ဖြစ်ဦးမယ်။ အာဏာရှင်စနစ်။ မဟုတ်မတရားမှု ဇာတ်မသိမ်းသေးဘူး။
ဘာသာရေးက လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ရောဂါက သူတော်ကောင်းရောဂါ။ လူတိုင်း သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်ကြတယ်။
မတော်မတရားမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်မဆိုင်ရအောင်၊ ငရဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား မယူအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဘာသာရေးသဘောတရား
လူယုတ်မာတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာ ရိုးသားတဲ့ လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဘ၀ကို သတ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး မရှိကြဘူး။
တရားမျှတမှု ကို ဦးထိပ်မပန်ဆင် ဘဲနဲ့ ဘယ်လို ဘာသာရေးနဲ့ သူတော်ကောင်းလုပ်မလဲ။
လူ့ဘ၀ကိုရထားတာ ကောင်းတာတွေ လုပ်ဖို့ဆိုရင် ကောင်းတာက ဘာလဲ။ မတရားမှုကို အသာလွှတ်ပေးလိုက်တာလား။ ငတ်ပြတ်နေတဲ့ လူပေါင်းများစွာရဲ့ မျက်နှာကို အသာမျက်ကွယ်ပြုလိုက်တာလား။ မဂင် ၈ပါး အကြောင်း ထားစမ်းပါ။ ဘယ်သူမှ နိဗာန် မရောက်ပါဘူး။
ဒီ ဘာသာရေးကိုမှ စမဝေဖန်ရင် လူတွေ ခေါင်းမပြောင်းဘူး။ လူတွေ ခေါင်းမပြောင်းရင် တခြား ဘာမှ မပြောင်းဘူး။
လု – ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး တွဲဖြေရှင်းဖို့ တော့ မလွယ်ပါဘူး သက်သက်စီ ခွဲမြင် နိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်
အစ်ပြုံးက ဘာသာရေးကိုတိုးတက်စေချင်တာလား နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တာလားး
နိုင်ငံရေးသမားက ဘာသာရေးလုပ်လို့ မရသလို ဘာသာရေးသမားလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ မရဘူး တွဲလုပ် ရင် တော့ ခုလိုပဲ ကမှောက်ကမ ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့
မျောက်သစ်ကိုင်းလွှတ်နေတဲ့ အစိုးရလို့ ပဲ ပြောချင်တယ်
မဘသ လည်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ ခုတော့ကွဲပြဲကုန်ပြီလေ အာဏာရူးတွေ ဘာသာရေးလုပ်လို့ ဖြစ်ရတာ။
တကန့် စီ ပဲထားသင့်တယ် တရားဆို တရား နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးပဲ တရားဆိုတာနူးညံ့သိမ်မွေ့ တယ် နိုင်ငံရေးက ဦးရာစား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ် မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနဲ့ အုပ်ချုပ်နိုင်ရင်တောင် အဲ့ဒါ ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံရေးပဲ နိုင်ငံရေးမှာ အနိစ္စ ဒုက္ခဆိုပြီးသွားမှတ်လို့ မရဘူးး ခု အစိုးရ က မယောင်ရာဆီလူး အနာတခြားဆေးတခြားဖြစ်နေတာ ရက်စက်တတ်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်သင့်တယ် ဘာသာရေးနဲ့ ရောပြီးလုပ်နေလို့အားမလိုအားမရနဲ့ လူပြောစရာဖြစ်နေတာ လေု
မျှစ် – ခုလို စကားပြောကြတာ ကောင်းတယ်။ နားလည်ပုံတွေ ရဲ့ သော့ချက်ကို သွားတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လုပ်ရတာလည်း မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့လည်း မဆိုင်တဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ တိုင်းပြည်ဟာ ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရကိုပဲ ရမယ် တဲ့။ အဲဒီ သီဝရီ ရှိတယ်။
ထိပ်က အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူထက် ပြုသမျှ နုတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားနဲ့ ဆိုင်ပါသတဲ့
လု – ဒီလိုစကားတွေမပြောရတာကြာပြီ
မျှစ် – အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး တွဲမတွဲထက် အဲဒီတိုင်းပြည်ျကလူတွေရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပဲ ဆိုင်သတဲ့
လူတွေ ခေါင်းပြောင်းမှ နိုင်ငံရေးပြောင်းသတဲ့။ အဲဒါ ဂျော့အိုဝဲ ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးပညာရှင်က ပြောခဲ့တာပါ
အခုက အမတို့က အမေစု အစိုးရကိုရော။ အရင်က အာဏာရှင်စနစ်ကိုရော မကျေနပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
လူတွေဟာ လုပ်လို့ရလို့ လုပ်တာ။ လုပ်လို့ မရရင် မလုပ်ဘူး။ နိုင်လို့ ရလို့ အနိုင်ကျင့်တာ။ အနိုင်ကျင့်လို့ မရရင် အနိုင်မကျင့်ဘူး
လူတွေ ခေါင်းပြောင်းဖို့ဆိုတာ အတွေးအခေါ်က သ၈ျီးအပြောအရ ဘာသာရေးက လာသတဲ့။ အမလည်း ဒါကို အမြဲစဉ်းစားတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်လာသလိုပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘာတွေ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး
အမက သဂျီးပြောတာထက် တခြားဟာကိုတောင် သွားပြီးစဉ်းစားမိတယ်။ ဂျော့အိုဝဲက ပြောခဲ့တယ်လေ။ တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေကို ဘရိန်းမ၀ပ်ဘဲ အဲဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ လုံးဝမရဘူးတဲ့။
အဲဒီမှာ ဘာသာရေးက လူတွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ကြံကြီးစည်ရာ ပုံစံတွေနဲ့ ရှိနေတယ်။ ဘုရားဟော ဇာတ်နိပါတ်တော် ဆိုတာတွေ ကလည်း အကုန် ရီစရာချည်း။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မတရားတွေကျတော့ နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်ဘူး။ အကုန် အရောရောအထွေးထွေးပေါ့။ အကာက များများ ။ အနှစ်က နည်းနည်း။
တိုင်းပြည်ကလူတွေအားလုံးနီးပါးဟာ အဲဒီ အတုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတယ်။ အဲဒီ အတုတွေကို လုံးဝအထိမခံဘူး။ ဘုရားဟော ဇာတ်နိပါတ်တော် တစ်ပုဒ်လောက်ပဲ ဖတ်ကြည့်လေ။ ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့။ ဒါပေမယ့် ဘုရားဟော ဓမ္မ ကျတော့ ထိပ်တန်းဖြစ်နေတယ်။
လိုရင်းကတော့ လူ့ဘ၀ရယ်၊ လူသားရယ်ကို တန်ဖိုးထားတာ ပိုသဘောကျပါတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း နိဗာန်ရောက်မှာ မှုတ်ဘဲနဲ့။ ဘာသာရေးကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေး သိပ်မလုပ်စေချင်ဘူး။ လျှော့စေချင်ပါတယ်။
ဘရိန်းဝပ်တယ်ဆိုတာက အတုတွေ ကို ယုံခိုင်းထားတာကို ပြောတာပါ
လု – ဘာသာရေးကိုအရမ်းတဖက်စွန်းရောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးးး ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိလာလေ တရားဘက်ကိုအာရုံရောက်လာလေပါပဲ ငါ စွဲမပြုတ်သေးတော့ တချို့ အစွန်းတွေတော့ငြိနေတုန်းပါပဲ
ဒီခေတ်အခါမှာ နိမ္ဗာန် ရောက်တဲ့သူ နည်းနိုင်ပေမယ့် ဘယ်သူမှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကြိုးစားရင်ဘယ်သူမဆိုရောက်န်ုင်ပါတယ်
လူဆိုတာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ တော့ လုပ်ရမှာပဲ အဲ့ဒါမှ လူဖြစ်ကျိုးနပ်မှာ လူဖြစ်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က ဒါန သီလ ဘာဝနာ အားထုတ်ဖို့ ပဲ လို့ ယုံကြည်တယ် ။
ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒ အပေါ်မှာ အစ်မပြုံး ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးအရာ တခုလောက်ပြောပြပါလားး
မျှစ် – အနတ္တ ပါ။
တရားမျှတမှု မပါတဲ့ ဘယ်အရာမဆို အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ဒါနတွေ ဘာမှ မယုံဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရလို့ ဆင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့ လူတွေကို အလှူဒါနပြုတယ်။ စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို ခြေထောက်ရိုက်ချိုးပြီးမှ ချိုင်းထောက်လှူ တယ်လို့ သဘောပေါက်တယ်။ မဟုတ်မတရားလုပ်ထားတဲ့ ခရိုနီ တစ်ကောင်လောက်ကို တရားမျှတမှု ချိန်ခွင်ပေါ် မတင်နိုင်ဘဲနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ ပညာပေး ဒါနပြုတာကို အယုံအကြည်မရှိ။ ကျေးဇူးလည်း မတင်ပါဘူး။ တရားမျှတမှု သာလျှင် အကောင်းဆုံး လူ့ကျင့်ဝတ်လို့ ယုံပါတယ်။ ဒါန သီလ အယုံအကြည်မရှိ။
လု – တရားမျှတ မှု ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဟောခဲ့ပြီးသားပဲ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ သီလ ဒါန ဆိုတာ ယုံကြည်ရတာထက် ကျင့်ကြံပွားများရမယ့်အရာပါ။
ဒါန သီလ ဆိုတာ ကိုတယောက်ချင်းစီက စောင့်ထိန်းသွားမယ် ဆိုရင် အစ်မ လိုချင် တဲ့ တရားမျှတမှု ရှိလာနိုင်တာပဲ အခြေခံသဘောတရားကို အရင်နားမလည်ထားရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ဖြစ်မလာနိုင်လောက်ဘူးလေ သူ့ အသတ် သတ်ရင် သူလည်းဆင်းရဲမယ် ကိုယ်အခုဘဝက ဥပဒေ အရ အရေးယူခံရမယ် နောင်ဘဝဆိုတာ ခနထားဦး ခုဘ ဝမှာတင် လက်ငင်းအကျိုးခံစားရတာပဲ ဒီလောက်အခြေခံ သီလသဘော တရားကိုနားမလည်ထားရင် လူသတ်ဖို့ လည်းဝန်မလေးတော့ဘူး ဒါန သီလ တွေ မရှိ လို့ခေါင်းပုံဖြတ်တာ အကျင့်ပျက်ခြစားတယ် ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာရတာ။
တရားမျှမှု ကို လိုချင် ရင် ကိုယ်တိုင်ရော တရားသဖြင့် ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့ တော့လို တယ် ကိုယ် လုပ် လို့ ကိုယ်ခံရတာ ဖြစ်ရတာ လို့လက်ခံထားတယ်
အပေါ်မှာ အစ်မပြုံးပြောတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တယ် ဆိုတာကို အကျယ် ပြန် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဒါန သီလ ကို ဘာလို့ မယုံတာလဲ
အဲဒါ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ဆန့် ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားး
ခရိုနီ နဲ့ အာ ဏာ ရှင်ကိုမုန်းတယ်။ တရားမျှတမှုကို လိုချင်တယ်။ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုကိုပြောင်းလဲ ပစ်ချင်တယ် ဒါက အစ်မပြုံး ရဲ့သဘောထားအကျဉ်းပဲ ဆိုပါစို့အနတ္တ ကို ယုံကြည်တယ် လက်ခံထားတယ် ဆိုတာနဲ့ရောဆန့် ကျင်မနေဘူးလားးး အနတ္တ ဆို တာ အစိုးမရတာ ငါပိုင်မဟုတ်တာ ကို စွန့် လွှတ်တတ်ရမှာလေ ။ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အရာကို ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်တာထက် မဖြစ်နိုင်ဘူးးလေ အနတ္တ ရဲ့ သဘောတရားက အဲ့ဒါပဲ
ဒါန သီလ ကို လက်မခံဘဲနဲ့ တရားမျှတမှုကိုလိုချင်လို့ မရဘူးး ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကိုတော့ လက်ခံထားရမယ် ကောင်းတာတွေ လုပ်ထားရက်နဲ့ ဘာလို့ ဆင်းရဒုက္ခ ဖြစ်ရတာ ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့ သူ တွေ ဒါတွေက အရင် ဘဝ တွေ က လုပ်ခဲ့တဲ့ ကံတွေ ကြောင့်ပဲ မဟုတ်လားးးလက်မခံလို့ ရဘူးး အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်လာတာလေ
အနတ္တ ကို ယုံကြည်ပြီး အတ္တတွေ ကို လိုချင်နေတာ တော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးး
မျှစ် – လုလုနဲ့ စကားပြောရတာ အမတော့ အသိတွေ တိုးတယ်။ တကယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ တကယ့်ဦးနှောက်ကို လှမ်းမြင်ရသလိုပဲမွဲတဲ့တိုင်းပြည်မှာ အလှူဒါန အများဆုံး လုပ်ကြတယ်တဲ့။ အလှူဒါန များလေ အဲတိုင်းပြည် မွဲလေပဲ။
လု – မြန်မာတွေရဲ့ ဦးနှောက်လည်းမဟုတ်ဘူး အစွန်းရောက်နေတဲ့ဘာသာရေးသမားရဲ့ ဦးနှောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ဒါတွေက လူတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ အတွေးပါ အညံ့စားဒါန လုပ်ရင်တော့ မွဲမှာသေချာတယ် အထက်တန်းစားဒါန လုပ်တတ်ဖို့ ပဲလိုတာပါ သူဌေးတွေ လုပ်တဲ့ဒါနကိုပဲ အထက်တန်းစားဒါနလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး အမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ခွဲခြားတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ ဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ဒါနကို အထက်တန်းစားဒါနလို့ ခေါ်တာ ။ ဘုရားက အလှူဒါန လုပ်ရင် ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့ မဟောခဲ့ဘူးး
ဖြစ်လေရာဘဝမှာ ငတ်ပြတ်နေဖို့ ဒါနလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးး ဒါနမပါ သံသရာလွန်စွာဆင်းရဲမည်တဲ့ ။ သံသရာမှာ ဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ ဒါနလုပ်ကြတာ အလှူလုပ်လို့ ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ အရမ်းကို သိမ်ဖျင်းတဲ့အတွေးပဲ အဲဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး အတ္တဝါဒီတွေရဲ့ အတွေးပဲ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပေးကမ်းနိုင်ခြင်းက အောင်မြင်ခြင်းတစ်ပါးပဲ ကပ်စေးနဲ တဲ့သူတယောက်ကို ဘယ်သူမှပေါင်းချင်မှာ မဟုတ်ဘူး အပေါ်ယံတော့ ပေါင်းလိမ့်မယ် ဒုက္ခရောက်ရင် အနားတောင်ကပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာတွေ ဒါနလုပ်တယ် ဆင်းရဲတယ် ဘာလို့ လဲ အပေါ်ယံ လူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ကြတာ လောဘတွေနဲ့ လုပ်ကြတာ တချို့ က သူတို့ ရှိတာကိုထုတ်ပြချင်လို့အဲ့လိုအယောင်ဆောင်ဒါတွေ နာမည်ကြီးချင်လို့ လှူကြတယ် တကယ်လို အပ်တဲ့နေရာမှာမလှူတတ်ကြလို့ လှူသလောက်မွဲနေတာ ။လှူလို့ မွဲတာမဟုတ်ဘူးပညာဉာဏ်မပါလို့ မွဲကြတာ
မျှစ် – ဒါနကို အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ ဖြေရှင်းနည်း အစစ်အမှန်လို့ မယုံဘူး။ မြန်မာအတွေးဆိုတာက အဲဒီ ဒါနကို ပြောတာမဟုတ်။ လုလု ပြောတဲ့ – ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကိုတော့ လက်ခံထားရမယ် ကောင်းတာတွေ လုပ်ထားရက်နဲ့ ဘာလို့ ဆင်းရဒုက္ခ ဖြစ်ရတာ ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့ သူ တွေ ဒါတွေက အရင် ဘဝ တွေ က လုပ်ခဲ့တဲ့ ကံတွေ ကြောင့်ပဲ — အဲဒါကို ပြောတာ။အဲဒီအတွေးက လူများစုပဲ။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ မဟုတ်တာ လုပ်ပြီး ချမ်းသာတာကို အမက အရင်ဘ၀က ကံကြောင့်လို့ကို မယုံတာ။ မဟုတ်တာ လုပ်တာဟာ လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်။ လုပ်လို့ ရလို့ လုပ်တာ။ တရားမျှတမှု ရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ မဟုတ်တာ လုပ်လို့ မရဘူး။ လူတွေ ဘာမှ ပြန်မတုံ့ပြန်နိုင်အောင် အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ ဘာသာရေး တအားဖိထားတယ်။ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်း ဆိုတာက စတဲ့ ၊ လက်တုန့်မပြန်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးအထိ။ အဲဒါ ဘာသာရေးကလာတာ။ ဒါဆို ဘယ်မှာလဲ တရားမျှတမှု။ လှူခြင်း မလှူခြင်းဟာ ထားပါတော့။ ဘီလ်ဂိတ်တောင် တအားလှူနေတာ။
လု – အင်းးပြောရင်တော့ ရှည်တော့မယ်
အစ်မ အဓိက ပြောချင်တာက နိုင်ငံရေး ဖိနှပ် ချုပ်ချယ်မှုလားး
မျှစ် – လူတွေ ခေါင်းပြောင်းမှ နိုငိငံရေးပြောင်းသတဲ့
လု – ချမ်းသာ ဖို့ ဆိုရင် ကံဉာဏ် ဝီရိယ လိုတယ်
မျှစ် – အဲဒီမှာ ဥာဏ်
လု – ဉာဏ်အကြောင်းပြောကြတာပေါ့
မျှစ် – အမတို့ ဗုဒ်ဓ ဘာသာက ဥာဏ်သမားအတွက်ပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘာသာကို ကွယ်ထားတဲ့ အတွေးတွေ များလွန်းတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် ၅နှစ်လောက် ဆိုရင် အဲဒီအရွယ်မှာ သင်ပေးထားတာက ဘ၇ိန်းဝပ်ပဲ။ တစ်သက်လုံး မပျောက်ဘူး
လု – ဘယ်လိုဟာလဲ တခုလောက် ပြောပြပါလားး
မျှစ် – ဘုရားဟော နိပါတ်တော် ဘယ်ဟာမဆို တစ်ခုမှ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူး
လု – အစ်မ က ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လားး
မျှစ် – အမက ဗုဒ္ဒဘာသာ သိပ်စစ်တာပေါ့။
ဥပမာ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘယ်ပြည်ကို နောက်တော်ပါ ရဟန်း ၅၀၀ နဲ့ကြွတယ် ဆိုကတည်းက ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူး။ အဲခေတ်က ကိန်း ဂဏန်း အရေအတွက် မပေါ်သေးဘူး
လု – မှားတယ်။ ယူဇနာ အသင်္ချေ တွေ ဘုရားဟောခဲ့တာ
အဲ့ဒါ ကိန်း ပဲ။
မျှစ် – အကုန်လုံး ဘာလာလာ ၅၀၀ ချည်းပဲ
လု – ဒါက ပြန်ဆိုသူရဲ့ အမှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မျှစ် – သီလနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း အမ သိပ်လက်သင့်ခံလို့ မရဘူး။ စားတဲ့လူရှိလို့ သတ်တဲ့လူ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သတ်တဲ့လူကပဲ ပါဏာတိပါတာကံ ထိုက်သွားတယ်။
သူ့အသက်သတ်တာ တကယ်ပဲ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင် ယုံရင် သတ်သတ်လွတ် စားရုံပါပဲ။ ဒီကတည်းက ဒီသီလက မတရားဘူး
လု – စားတဲ့သူလည်း တဏှာနဲ့ စားရင်ဖြစ်တယ်လေ
မျှစ် – အင်းလေ အဲဒါကြောင်ပေ့ါ့ သတ်သတ်လွတ်တော့ မစားခိုင်းဘဲနဲ့ သတ်တာကျတော့ အပြစ်ရှိသတဲ့
လု – သက်သက်လွတ်စားတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး
မြင်သားကြားသား မစားနဲ့ လို့ ပြောတာ
မျှစ် – ဒါတွေကို အမက ဘုရားဟောလို့ကို မယုံတာ။ လူတွေဟာ လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ ကလီကမာနိုင်မှုအတိုင်း ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပြီး တွေးထားကြတာ
လု – ဒါဆို သီလကိုအစ်မ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့
မျှစ် – မခံဘူး
လု – အစ်မ သေချာမလေ့လာသေးလို့ ပါ
မျှစ် – မပြည့်စုံတော့တဲ့ သီလ
ထားပါလေ သီလတွေ ဘာဝနာတွေ အဲဒါတွေက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ မကောင်းဘူး။ လူဆိုးလူယုတ်တွေ ပိုပြီး ထကြွသောင်းကျန်းလို့ ကောင်းသေးတယ်
လု – အစ်မ တဖက်စွန်းရောက်နေတယ်လို့ ထင်တယ်
မျှစ် – အစွန်းရောက်တာက ဗုဒ်ဓဘာသာတွေ၊ မွတ်စလင်တွေ။ အဲဒီတိုင်းပြည်တွေ မှာ တစ်တိုင်းပြည်မှ ဒီမိုရဲ့ အရသာစစ်စစ် မရှိဘူး။ အမက ဘာသာရေးကို ဘ၀ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ပဲ ထားတော့တာ
လု – လုလု က အကောင်းဆုံးဘာသာကိုရွေးထားတာ ပါ လူပြောသူပြောနဲ့ ယုံထားတာမဟုတ်ဘူးလေ
မျှစ် – သိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် အနှစ်ကိုပဲ လုပ်လေ။
ဗုဒ်ဓဘာသာစစ်စစ် နိုင်ငံ မြန်မာပဲ ရှိတော့တာ
ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ကမ္လာ့အဆင်းရဲဆုံးထဲမှာ ပါနေတယ်။ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးအရှည်ဆုံး ထဲမှာ ပါတယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ အစိုးရကို ရမယ်လေ။ ကိုယ်ခေါင်းပြောင်းမှ အကုန်ပြောင်းတာ
အာဏာရှင်စနစ် ဒီလောက်တောင် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တာ လူတွေရဲ့ ပဓာနကျတဲ့ အတွေးအခေါ်ကြောင့်လို့ အိုဝဲ ရဲ့ သီဝရီ အရ ကောက်ယူလို့ ရတယ်
လု – အနှစ် ဆိုတာ ဘာလဲ
အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည် တာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေကြောင့်ပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာက အစွန်းလွတ်ပါတယ် တရားကြောင့်မဟုတ်ဘူး လူ ကြောင့်ပါ
မျှစ် – ဒါဆို တစ်တိုင်းပြည်လုံးနီးပါး အစွန်းရောက်နေတာပေါ့
လု – ပြည့်တဲ့အိုးက ဘောင်မခတ် ဘူးဆိုသလိုပဲ လေ တရားကိုအတွင်းအနှစ်ထိသိတဲ့သူက အာဏာရှင်တွေ ခရိုနီတွေ နိုင်ငံရေးတွေ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး
သူ့ အတွက် လိုရင်းကိုပဲသွားမှာ
မျှစ် – ဒီဘာသာက ဒါနပိုင်း၊ သီလပိုင်း ၊ ၀ိနည်းပိုင်း ခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ပြတ်ကျန်ပဲ
လု – အဲ့ဒါ မဟာယာန ပဲ
ဘုရားစကားက ခေတ်နဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်းမှန်တယ်
ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ် ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဘုရားထက် ပညာဉာဏ် ပြည့်ဝနေဖို့ တော့ လိုလိမ့်မယ်
မျှစ် – အဲဒါတွေက ဘုရားချမှတ်ထားတယ်လို့ ဘယ်မှာ သက်သေရှိလဲ
လု – ပုထုဇဉ် အတွေးလောက်နဲ့ တော့ ဘုရားလမ်းစဉ်ကို ဖြုတ်တာ ဖျက်တာ တွေ လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ တွေးတောင်မတွေးသင့်ဘူး။ လူတွေ လက်ချက်ပါ
မျှစ် – အဲဒီမှာ အာဏာရှင်စနစ်ပဲ။ တွေးတောင် မတွေးသင့်ဘူး ဆိုတာ
လု – မှားတယ်
မျှစ် – အာဏာရှင်စနစ်ဟာ အတွေးကို သတ်တာ
စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားလို့ကို မရဘူး။ အဲဒါ ကွန်မြူနစ် တွေရဲ့ အာဏာရှင် စနစ်
လု – ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အနှစ် သာရ မှာ အာဏာရှင်စနစ်မပါဘူး
မျှစ် – စိတ်နဲ့ပြစ်မှားတာတောင် အပြစ်ရှိသတဲ့။ အဲဒါ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ သွေးကြော
လု – အာဏာရှင်ကိုမုန်းတိုင်း တရားကို ထိခိုက်နေတာတော့ မကောင်းဘူးနော် တလမ်းစီပဲ
အခုဆုံနေတဲ့သူတွေက ဘုရားချွတ်လို့ မရလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ။ လူမိုက်တွေပေါ့
မျှစ် – အမတို့ ပြောနေကြတာမှာ ကွင်းဆက်ပြတ်နေတာက အာဏာရှင်စနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပျောက်နေတဲ့အကွက်။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ လူတစ်စု လက်နက်အားကိုးနဲ့ တက်အုပ်ချုပ်ရုံနဲ့ အဓွန့်မရှည်ဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ သစ်ပင်တစ်ပင် ရှင်သန်သလိုပဲ။ သစ်ပင် ရှင်သန်ဖို့ လေ၊ ရေ၊ မြေ၊ နေအလင်းရောင် တို့ လိုအပ်တယ်။ တစ်ခုခု ချို့တဲ့ရင် အပင် အသက်မရှင်ဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်မှာလည်း အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ လက်နက် အားကိုး၊ ထောက်လှန်းရေး၊ မတရား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ ဒီ့အပြင် အခရာအကျဆုံး အတုပြုလုပ်မှု။
အတုပြုလုပ်မှုဆိုတာ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို လှည့်စားတာ၊ သိပ်ပံပညာရပ်တွေ မိုးပျံလို့ ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုမှာ အတုပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဘရိန်းဝပ်တာကို ပြောတာ ညီမ။ ငယ်ငယ်ကလေးထဲက ပါတီရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ထည့်သွင်းထားတာမျိုး။ တစ်ခုခု ကြံကြီးစည်ရာကို ယုံခိုင်းထားတာမျိုး။ အဲဒီ အတုပြုလုပ်မှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ အခရာကျသလဲဆိုရင် အာဏာရှင် လူပုဂ္ဂိုလ်တောင် ရှိစရာ မလိုဘူး။ အုပ်ချုပ်တဲ့လူ ရှိစရာ မလိုဘဲနဲ့ကို တိုင်းပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ ရတယ်။
လက်နက်ရယ်၊ ထောက်လှန်းရေးရယ်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုရယ်၊ အတုပြုလုပ်မှုရယ် ဒါတွေ ရှိရင် အခြေခံလိုအပ်ချက် ပြည့်စုံတယ်။ ဒါတွေ မပြည့်စုံရင် အာဏာရှင်စနစ် မရှင်သန်ဘူး။
ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက ဒီကနေ့အထိ အာဏာရှင်စနစ် တည်တံ့နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီစနစ် တည်တံ့ခဲ့တာမှာ စောစောက ပြောတဲ့ အခြေခံလိုအပ် ချက် တွေ ပြည့်စုံနေလို့ပါပဲ။ လက်နက်ရယ်၊ နှိပ်စက်မှုရယ်၊ ထောက်လှန်းရေး ရယ် ရှိတာ ထင်သာမြင်သာတယ်။ အတုပြုလုပ်မှုက ဘယ်မှာလဲ။
လူတွေ ကို မျက်စိပိတ် နားပိတ် ပါးစပ်ပိတ် ခဲ့တာ အတု ပြုလုပ်မှုထဲမှာ အကျုံး ၀င်တယ်။
အခု ဒီအတု ပြုလုပ်မှု မရှိတော့ဘူး။ လက်နက်ရယ်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုရယ်၊ ထောက်လှန်းရေးရယ် ဒါတွေလည်း အ ခု မရှိတော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည် ဒီမို ရပြီပေါ့။ အခု အမတို့ တိုင်းပြည်က ဒီမိုလား။ အမည်နာမအရတော့ ဒီမိုပဲ။
အနှစ်သာရပိုင်းမှာကတော့ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းသလားနေလို့ ရတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်လား။
လု – လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက ချက်ခြင်းဆိုသလို ဦးနေဝင်းလက်ထဲရောက်ခဲ့ ရတယ် လက်နတ် အားကိုးနဲ့ 
မျှစ် – တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အင်အားက စစ်တပ်ရဲ့ လက်နက် မဟုတ်။ ပြည်သူ ပါတဲ့
လု – ပြည်သူကို လှုပ်မရအောင်လုပ်ထားခဲ့တာ။ တခွန်းမှမဟရဲအောင်လုပ်ခဲ့တာ
မျှစ် – ပြည်သူ့အင်အား ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုရင် ခုပဲ စစ်ကောင်တွေကို ကန်ချလိုက်ပြီလေ။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က သက်ရောက်မှု သိပ်ကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ကောင်တွေ အေးဆေး လမ်းသလားလို့ ရနေတာ။
ပြည်သူကိုက လိုလားရင် လိုလားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ပေးရတယ်။ ပြည်သူ့အင်အား အကြီးဆုံးမို့။
ဒီတိုင်းပြည်မှာ ခုပဲကြည့် လက်တုံ့ပြန်တာကို မ ထောက်ခံတဲ့လူ ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်း ရှိမလဲ။ ၉၉ လောက်ရှိမယ်။ ဒီတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်ရတာပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ အစိုးရပဲ ရတယ်လို့ပြောတာ
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ တိုင်းပြည်မှာပဲ ခုလို မဟုတ်တာကို လုပ်လို့ရတာ။
လု – နောက်ကြောင်းပြန်နေရင် ရှေ့ မရောက်တော့ဘူးလေ လုပ်စရာတွေက အများကြီး အဲ့လိုအဖြစ်တွေ နောက်မရှိအောင် ကာကွယ်ထားဖို့ ပဲလိုတာပေါ့
မျှစ် – မရနိုင်ဘူး လုလု။ F=ma လိုပဲ။ အီကွေးရှင်းတစ်ကြောင်းလို တိကျသေချာတဲ့ သီဝရီ။ လူတွေ ခေါင်းမပြောင်းရင် ဘာမှ မပြောင်းဘူး။
ဒီဘာသာရေးက အစစ်ဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိတယ်။ အနှစ်ပိုင်းမှာ အစစ်။
အပေါ်ယံအကာ ကနေ ဆွဲယူလာတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကတော့ လူတွေကို သိပ်လွှမ်းမိုးတယ်
ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းတွေ။ အတိတ်ကံကို အလွန်အမင်း ပုံချတာတွေ။ အဲဒါတွေ
ဥပမာ ဝေသန္တရာ ဇာတ်ဆိုပါတော့
တိုင်းပြည်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆင်ဖြူတော်ကို ဘုရင်က ပေးပစ်လိုက်တယ်။ ဒါ အလွဲသုံးစားမှု။ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကို ပေးပစ်လိုက်တယ်။ ဒါ အလှူ ဒါန မဟုတ်။ ရက်စက်မှု။ လူကုန်ကူးမှု
တေမိဇာတ်၊ နေမိဇာတ် ဘာမှ ကို အဓိပ်ပါယ် မရှိ။ ဘုရားဟော ဆိုတာ မယုံပါဘူး။ လူတွေ လျှောက်ရေးထားတာ
လု — နောက်တမျိုးအဓိပ္ပာယ်က လူအများကိုကယ်ချင်လို့ ပါရမီတခုကို ရင်ကွဲခံပြီးဖြည့်ရတာလေ
မျှစ် – အမတို့ အာလူးဖုတ်တာ ကျက်မယ် မထင်ဘူးနော်။
လု – ဘယ်တော့မှမကျက်နိုင်ဘူး
အမြင်မတူတဲ့သူနှစ်ယောက်ဖုတ်တာပဲ မီးများတယ် မီးနဲတယ်နဲ့ မကျက်တော့ဘူး
အရူးတကာ့ အရူးထဲမှာ အာဏာရူးက ချွတ်ရအခက်ဆုံးတဲ့။ အိမ်ထောင်ဦးစီးး ဆယ်အိမ်မှူး အလုပ်ရှင် ဌာနမှူး အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးကအာဏာအနဲအများပေါ်မူတည်ပြီး မသိမသာ ရူးကြသေးတာပဲ ။ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်းအာဏာရှင်တွေ အာဏာရူးတွေ ရှိနေမှာပဲ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အာဏာရှင်တွေ ပပျောက်အောင်လုပ်ပေးတာ မွေးထုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးးး။ ငရဲ ရှိလို့ရှိတယ် ပြောထားတာကို ခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ မထင်ဘူးး။ မယုံလို့ ပြစ်မှားစော်ကားမိရင် ကိုယ်ပဲခံရမှာ ။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခိုင်းတာလို့ ပဲထင်တယ် ။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးလုပ်စားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲ အဲ့ဒါ သူတို့ အပိုင်း အဓိက က ကိုယ်မှာ အမှားအမှန်ဝေဖန်ခွဲခြားတတ်တဲ့ ပညာရှိနေဖို့ ပဲ လိုတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သီလ တရားကိုအခြေခံထားတော့ သီလ ကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ အမည်ခံပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ အခြေခံတရားကိုမစောင့်ထိန်းနိုင်ရင် အာဏာရှင်တွေ ပိုင်းလုံးတွေ ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေ သူခိုးဂျပိုးတွေ လူသတ်သမားတွေရှိနေဦးမှာပဲ ။
Tawwin Pan says: ဆရာမစာထဲက
“လူတွေဟာ လုပ်လို့ရလို့ လုပ်တာ။ လုပ်လို့ မရရင် မလုပ်ဘူး။ နိုင်လို့ ရလို့ အနိုင်ကျင့်တာ။ အနိုင်ကျင့်လို့ မရရင် အနိုင်မကျင့်ဘူး” ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ သော့ချက်က အောက်နားမှာ ညီမ။ ဒီစနစ်အကြောင်း စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာရတာ။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တော့မဟုတ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းမှ သိလာရတဲ့ အမရဲ့ ပညာရေးပါ။
kai says: အောင်မြလေး.. သတ္တိကတော့ မသေး….
ဒီစာတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲ.. ထည့်ပေးချင်တာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: ပိုစ့်မတင်တာ ကြာပြီဖြစ်သော ပြုံးအန်တီရဲ့ပိုစ့်ကို အားရပါးရ ဖတ်သွားပါကြောင်း
မှတ်သင့်တာကိုမှတ်ပြီး တွေးသင့်တာကို ဆက်တွေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း
ကျနော် လူဖြစ်လာတာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။
ကျနော် လူ ဖြစ်လာတာ လူပီသဖို့ပါ။
လူပီသစွာ နေထိုင် ကြီးပြင်းသွားတော့မယ်။
လူပီသစွာပဲ တချိန်ချိန်မှာ အသက်ရှုရပ်သွားမယ်။ ဘာသာရေးတွေ နိုင်ငံရေးတွေ စီးပွါးရေးတွေကိုလည်း
လူပီသစွာပဲ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်သွားမှာပဲ။
.လောလောဆယ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်ဖို့ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ဘာညာသာလကာတွေ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ကို မတွေးရေးချ မတွေးတော့တာ။
အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက လူဖြစ်ဖို့။
အခုထိကို လူပီပီသသ မဖြစ်သေးလို့ ဘာသာရေးကို ခေါက်ထားတယ်။
ဒါနဲ့ အန်တီပြုံးကို တစ်ခု မေးမယ်နော်။
လူဦးခေါင်း အစားထိုးကုသမှုကို စမ်းသပ်အကောင်အထည်ဖော်တော့မယ်။
တကယ်လို့ အဲ့ကိစ္စ အောင်မြင်ရင်. . . .
အားလုံးလည်း အလွယ်တကူ အစားထိုး လဲလှယ်လို့ ရမယ်ဆိုရင်
အန်တီပြုံးရဲ့ ဦးခေါင်ကို အစားထိုး လဲလှယ်ပစ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူးမလား။ ဦးခေါင်း/ဦးနှောက် လဲလှယ်တာက အဓိကလား။အတွင်းစိတ် ပြောင်း ယူတာက အဓိကလားလို့ပေါ့။
ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တော်တော်များကိုကို ခေါင်း လဲ သင့်တာလား
အတွေးအခေါ် ခံယူချက် အစွဲတွေ ချွတ်သင့်တာလားပေါ့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တိုင်းပြည်ဆိုတာ မိသားစု တစ်စုလိုပဲ ဦးလေး။ ထိပ်စီး အိမ်ထောင်ဦးစီးက စပြီး အတွေးမှားရင် တစ်အိမ်ထောင်လုံးကို ရိုက်ခတ်တာပဲ။ သူများတွေ ဘာတွေးတွေး ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာ လက်တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးနီးပါး ဟာ ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင်တွေဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ ခေတ်ဆိုတာကို လူများစုက ဖန်တီးခဲ့တာ။ လူများစုရဲ့ သဘောထားဟာ ကျန် လူနည်းစုအပေါ်လည်း ဆိုးဆိုး ရွားရွားဖြစ်စေတာပဲ။
အတွင်းစိတ်ဆိုတာက ဦးနှောက်ရဲ့ အာရုံတွေ လှုပ်ခတ် ထိခတ် မီးပွင့်တာကနေ စိတ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာ မှုတ်ဘူးလား။ ဦးနှောက်ချင်း လဲလို့သာ ရမယ်ဆိုရင် လဲတာပေါ့။ ဒါမှ မေ့နည်း ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ။ မေ့ချင်တာလေး တွေ ရွေးပြီး မေ့လို့ ရရင် ကောင်းမှာ။ ဒါမှ လူ့ဘ၀ တန်ဖိုးရှီမှာ။
Ma Ma says: အခုပြုံးရဲ့ပိုစ့်က မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အယူမှားတွေ အယူသည်းတာတွေကို ပြောတာလို့ ထင်မိတယ်။
လုလုပြောတာတွေကတော့ ဘုရားဟောတရားတော်တွေကို တကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ အယူအဆတွေလို့ (ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်) လက်ခံမိတယ်။
အကာကိုဖယ်ပြီး အနှစ်ကိုဆယ်နိုင်ဖို့ (ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်သင်တန်းပေးသလို) မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်က ပညာဗုဒ္ဓသာသာဝင်ဖြစ်အောင် (ဘုရားဟောတရားအတိုင်း) အမှန်တရားတွေကို သိဖို့ လေ့လာဖို့ အများကြီးလိုပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မိရိုးဖလာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် ထက် အများကြီးပိုပါတယ် တီမ။ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ သော့ချက်ကို သွားနေတယ်။ အဲကွင်းဆက်ကို ဖမ်းမမိကြဘူးနော်။ ဘရိန်းဝပ်မှာ အခရာအကျဆုံး။
ဂျစ်စူ says: ဒီပို့စ်က
ကျမ်းဂန်တတ် ဘုန်းကြီးတွေရယ် အစိုးရ တွေရယ်
ကိုယ်လို ဘုန်းကြီးမဟုတ် အစိုးမရဖူးတဲ့
လူအတွက် လက်ညှိုးက ဘယ်ထိုးရမှန်းမသိ
နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး လိုက်စားခြင်းမရှိ
အလှူလောက်ပဲ လိုက်စားတာဂလား စိတ်ထဲရှိတာ ပြောရရင်ဖြင့်..
ဘုန်းကြီးတိုင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး
စာအုပ်တိုင်း လူတိုင်း ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားမပြု
အစိုးရကို မကြိုက်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်
လသားအစိုးရ ခေတ်ပေမဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် အတင့် ရှိနေပါပြီ
အာဏာရှင် မှိုင်းက လွတ်ခါစရှိတဲ့ လူတွေ
ဒီမို ရပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်ဓာတ် အတွေးခေါ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေ
ဟပ်ချလောင်း ရင့်ကြပ် ပြည့်ဝလာမှာ မဟုတ်ဘူး
လွတ်လပ်စွာ လေ့လာ တွေးခေါ် လုပ်ကိုင်ခွင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အဏာရှင် မဆန်ပါဘူး
စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားရင် ငြိမ်းချမ်းလိုက်မဲ့ ကမ္ဘာကြီး ☺
အပြောလွယ်သလောက် အကျင့်ခက်တာလေးပဲရှိတာ ထို့ကြောင့်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မှန်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ လေ့လာတွေးခေါ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းက လွတ်လပ်ခဲ့သလဲ။ ခလေးတစ်ယောက် ၅ နှစ်လောက်ဆို ဘရိန်းဝပ်စပြီ။ အခု ဓမ္မစကူးလ်တွေနဲ့ သာဆိုးသေး။ ဒါတောင် နတ်နဂါး ယုံကြည်မှုတွေ မပါသေးဘူး။
ပြီးတော့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားခွင့်ရှိတယ်။ ဘုရားကိုလည်း စိတ်နဲ့ပြစ်မှားခွင့်ရှိတယ်။ သူတို့ပဲ ဟောထားတာလေ စိတ်ကို ထိန်းလို့မှ မရတာ။ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်တာဟာ ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်ပါ။ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်တယ် ဆိုတာ လူ့ဦးနှောက်ကို ထိန်းချုပ်တာ။ အတွေးအခေါ်ကို ထိန်းချုပ်တာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ပြီးတော့လေ ကျန်းဂန်တတ် ဘုန်းကြီးတွေရယ် အစိုးရရယ် ၀င်ဆွေးနွေးမှ ဆိုတာထက် နိုင်ငံရေးပညာရှင် ၀င်ရှင်းမှ ရမှာ။ အဲဒါမျိုးက စာရေးဆရာ မောင်ဝံသ ကို သတိရမိတော့တယ်။ သူသိတယ်။ အဲဒါကို
ဦးဦးပါလေရာ says: ဆရာမပြုံးပြောသွားတာတွေကို သဘောကျတယ်…
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကာကွယ်ချင်ရင်
အခု ဆရာမပြုံး ပြောသွားတာတွေကို ရင်ဆိုင်ချေဖျက်နိုင်ဖို့လိုတယ်…
(သူကြီးက ကြောက်ကြောက်နဲ့ တစ်လုံးတစ်လေထုတ်ပြောတာ)
လူအများအပြားက တစ်စွန်းတစ်စစီ ရင်ထဲမှာမွေးထားတာ..
အဲဒါတွေကို မရှင်းနိုင်ရင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဂန့်မှာပဲ….
စာရေးကောင်းလို့ စာနဲ့ရှင်းရုံလောက်နဲ့ မရ
ရင်ထဲကပြဿနာ ရင်ထဲအထိ ပြန်ရှင်းနိုင်ရမှာ..
အသက်လဲကြီး သတိလဲမကောင်း အချိန်လဲ မရတော့..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: လက်မခံတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် — ဆိုတဲ့ စကားလုံးနောက်က အကြောင်းအရင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ခုက ထေရ၀ါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုရင်း ထက် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တည်ပုံ — သွေးကြော — ဘာလို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့သလဲ — ရခဲ့ရင်ကော ဒေါင်ဒေါင်မြည်ဒီမို ဖြစ်လာမလား — ဘာသာရေးနဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်သလဲ — အဲဒါက ရှင်းထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်ပြဖို့ ခက်တယ်။
etone says: အာလူးဖုတ်ဒဲ့ … လာဂဲ့ ခွက်ဒစ်ပေး :P
မပေးလျှင် သားလေးပေး :lol
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟိဟိ ခုလည်း မတတ်တဲ့လူနဲ့ မသိတဲ့လူ အာလူးဖုတ်နေကြတာလေ။ ခွိ
kai says: Myanmar has suffered more from natural disasters this past decade than almost any other country in the world. The years to come may be no different.
အင်း… မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတဲ့နိုင်ငံမို့လို့..။ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆုံးကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်လျှောက်ထားလို့.. သာသနာထွန်းကားလို့… အော်နေရင်းပဲ.. ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့..။ အခုလည်း.. ကမ္ဘာ့ သဘာဝဘေးဒဏ်အခံရဆုံးတနိုင်ငံဖြစ်နေခဲ့…။
ကမ္ဘာပြည်တွင်းစစ်အကြာဆုံးနဲ့.. အစွန်းရောက်ရန်အလိုဆုံးသူများရဲ့တိုင်းပြည်မှာ.. သယံဇာတတွေကိုအဖြုန်းဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ကြားက.. ဘိန်းအထွက်ဆုံးတိုင်းပြည်လည်းဖြစ်နေခဲ့..။
… ဆက်လုပ်ကြ… အခြေခံပညာရေးတန်းမအောင်.. သင်္ချာမတတ်.. သိပ္ပံနားမလည်သူများရဲ့ သြ၀ါဒဆက်နာခံကြ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘာသာရေးမှာ ခက်သွားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများထက် မြင့်မြတ်သွားတယ် ထင်တာ။ ဥပမာ ဘုန်းဘုန်းတွေကို လှူထားတဲ့ ကျောင်းဆောင်က လွတ်နေတာမို့ ခလေး မူလတန်းကျောင်း လုပ်ဖို့ အလှူခံပါတယ်။ ဆရာတော်တို့အတွက် ဘေးနားမှာ တဲထိုးပေးပါ့မယ်ဆို သူတို့လှူမလား။ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ်ပေါ့နော်။
ပြီးတော့ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားတာထက် ပိုပါတယ်။ လူတွေမသတီတာကို အနစ်နာခံ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးရမယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ဘုန်းကြီး ၀တ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ထားပါလေ အဲဒါတွေ ပြောရင် ဘုန်းကြီးတွေကို သွားတိုက်ခိုက်တယ် ထင်လိမ့်မယ်။ တကယ်က ဘုန်းဘုန်းတွေကို တိုက်ခိုက်လိုရင်း မဟုတ်ပါ။ သူတို့လည်း ငယ်ကတည်းက ဒီလိုအသိနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတာပဲဟာ။ ခုမှ သွားပြောလို့ ဘယ်ရတော့မလဲ။
အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တည်ပုံကိုပဲ လေ့လာသရုပ်ခွဲချင်တာပါ။ ဒီနှစ်ခု ဆက်စပ်မှု မရှိဘူး။ ဆွဲအသုံးချတာပါလို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်း ကွင်းဆက်လေး ထုတ်ကြည့်ချင်တာပါ။
kai says: တိုက်ရိုက်ကွင်းဆက်ကတော့.. ထေရ၀ါဒနိုင်ငံတွေအကုန်(အကုန်)… မွဲပြီး.. ပဋိပက္ခအကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာနဲ့.. ကြည့်ဆုံးဖြတ်ရင်ရပါတယ်..။
လာအို-ကမ္ဘောဒီးယား=ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး ပိုပေါ့ရဲ့ လူသန်းချီသတ်ခဲ့တဲ့.. သူများနိုင်ငံအလှူငွေတွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံ
ထိုင်း= ကမ္ဘာ့အာဏာသိမ်း အများဆုံးစစ်တပ်နဲ့.. ပါတီအုပ်စုတွေကြား ပဋိပက္ခအဖြစ်ဆုံး.. နိုင်ငံ..။
“The ends justify the means.” – Niccolò Machiavelli
အောင် မိုးသူ says: အာလူးဖုတ်တာ ကောင်းလိုက်တာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကျက်သေးဘူး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: စကားစပ်မိလို့ ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အရင်က မျှစ်ကြော် ရှန်တိနိကေတန်ကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။ ဆရာပါရဂူ ဆိုတာ ဘာသာရေးဆက်နွယ်တဲ့စာအုပ်တွေ ရေးတယ် ပြန်တယ်နော်။ ဒါတောင် ဆရာပါရဂူက ပြောတယ်။ ခြေရာတော်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးပြောတာပါ။ မြတ်စွာဘုရား မြန်မာပြည်ကို တစ်ခါမှ မကြွခဲ့ဘူးတဲ့။ နောက်တော်ပါ ရဟန်း ၅၀၀ ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ သူအများကြီး ပြောသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမ စိတ်ထဲဝင်သွားတဲ့ ပထမအတွေးက ဒီဆရာကြီး ဒိဌိ လားဆိုတဲ့ အတွေးပဲ။ တော်တော်လေးလည်း ကြာရော၊ ကျမ သူ့ကို အကြည်ညို ပျက်ချင်လာပါရော။ သူပြောတာကို ဘယ်လိုမှ လက်သင့်ခံလို့ မရခဲ့ဘူး။ အချိန် အရမ်းကြာသွားမှ တဖြည်းဖြည်း လက်သင့်ခံလာနိုင်တာ။ နောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ဘရိန်းဝပ်ကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားတော့တာပဲ။
kai says: ထေရာဝါဒကို ဝေဖန်သူတွေကို .. အဲဒီခေတ်တွေက..ဖမ်းပြီး.. ထောင်ချပစ်တယ်..။ နှိမ်တယ်..။ ပိတ်တယ်..။
ဆရာပါရဂူလည်း.. မိုးပြာဆိုပြီး.. ပြဿနာရှာခံရတာပေါ့..။
တကယ်တော့.. ဆရာကြီးက.. မြန်မာထေရ၀ါဒထဲ ဟိန္ဒူသာသနာဘယ်လောက်ရောမွှေခံထားရတယ်ဆိုတာ.. အူရဒူ၊ ဟင်ဒီဘာသာစကားတွေဖတ်နိုင်သူမို့.. ပိုသိနေတယ်လို့ထင်မိတယ်..။
လုံမလေးမွန်မွန် says: 1984 ကို ဖတ်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မမြင်ဘဲ မြောက်ကိုရီးယားကို ကျော်မြင်မိတယ် . . . ငါတို့နိုင်ငံက တော်ပါသေးတယ်ပေါ့ . . . ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်မှပဲ ကိုယ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲလို့ သတိထားမိလိုက်တာ . . . ဒီပို့စ်ကို အတော်လေး အချိန်ပေးပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်. . . အတွေးတွေ အများင်္ကြီးတော့ ရသွားပါတယ် အစ်မ . . . ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လတ်တလော ယုံကြည်နေတာကို ပြောရရင် ဝိပသနာပါပဲ . .
ဒီတလမ်းထဲကပဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့.. ၀ိပဿနာဆိုတာကို.. (ထေရာဝါဒကပဲယုံကြည်တဲ့) ပိဋကတ်၃ပုံလုံးထဲ မွှေနှောက်ရှာကြည့်ဦး..။
ပိဋကတ်၃ပုံ.. စီဒီရှိရင်ပိုလွယ်တယ်..။ Search လုပ်လိုက်ယုံ..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကတောင်.. ၀ိပဿနာတရားစခန်းတွေမရှိခဲ့..။ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ် ၂၀၀၀ ကျော်ခရီး.. မြန်မာမင်းတွေလက်ထက်ကလည်းမရှိခဲ့..။
အိုဘယ့်.. ထေရာဝါဒတို့ရဲ့.. ဟိန္ဒူကြီးဦးဂိုအင်ကာ… ၀ိပဿနာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဝိပဿနာဆိုတာ တရားစခန်းဝင်တာကို ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ… စိတ်ကို စူးစိုက်ကြည့်တာ… ဟိုနေ့က မခိုင်ဇာတင်ထားတဲ့ emotional management ဆိုတာမျိုးကို meditation က စလုပ်ကြည့်မှ ရမယ်လို့ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်) ထင်နေတာ… ပစ္စပ္ပန်တည့်တည့်ကို ရှုတတ်ဖို့ဆိုတာ ရုတ်တရပ်ကြီးတော့ ရမယ်မထင်ဘူး.. အချိန်တစ်ခုပေးပြီး အာနာပါနလုပ်ကြည့်.. အဲဒီကတစ်ဆင့်မှ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်… အရှိတရားတွေကို မြင်လာမယ်… အမှောင်ဖုံးထားတာကနေ ရုံးထွက်နိုင်မယ် ထင်တာပဲ..
စကားအတင်းစပ်… အနော်လည်း ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေ ဗုဒ္ဓဝင်တွေကို အယုံအကြည်သိပ်မရှိပါဘူး.. ထပ်ပြောရရင် နတ်ပြည်နဲ့ ငရဲတောင် မယုံချင်ဘူး.. ဒါပေမယ့်လည်း မိစ္ဆာဒိဌိဆိုရင် ကမ္ဘာပျက်ရင်တောင် မကျွတ်ဘူးဆိုပြီး အဆုံးပိတ်နဲ့ ခြောက်ထားလိုက်တော့… Freedom from Fear ပါပဲလို့.. :P
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်ပြောရင် အမလည်း ရောချ ပဲ ။ ဘာမှ သိပ်မသိဘူး မွန်မွန်ရေ့။ ကံဆိုတာ စွမ်းအင် လို့ သိမှတ်ဖူးတယ်။ Energy is not created nor destroy. ဆိုတဲ့ လော အရ ကံသတ္တိ ဆိုတာ ကုန်သွားရိုးမရှိ။ ပြောင်းသွားလို့ ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဘ၀ကံဟာ ချုပ်ငြိမ်းမသွားနိုင်။ နောက်ဘ၀ဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒီလိုမျိုး တွေးခဲ့ဖူးပါ့။ ခုတော့လည်း အင်တာနက်လိုင်းသုံးနေတဲ့အခါ တဖျပ်ဖျပ် သွားနေတဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာသုံးတဲ့ အရွေ့စွမ်းအင် အလေးချိန်က စတော်ဘယ်ရီသီး အရွယ်လောက် ဆိုတော့ လူလည်း ကြောင်ထွက်သွားပြီ။ ဂယ်ပြောတာ။ လိုက်မမီတော့ဘူး။ ဒီလောက်မြန်မှတော့ ဇော ၇ ချက်ဆိုတာလည်း ရှိပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ တွေ အသာထား။ ဗုဒ်ဓ ဘာသာတိုင်းပြည်တွေ မဟန်တာတော့ အမှန်ပဲ။
မြစပဲရိုး says: Interesting Discussion!
လုလု ရဲ့ အဆုံးသတ် ကို ဝင်ရှုပ်ပါရစေ။
တရားမျှတမှု၊ လူလူချင်းလေးစားမှု၊ ချမစားမှု၊ ပြည်သူ ကိုအလေးထားမှု စတာ တွေ နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး တွေတိုင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိက တိုင်းပြည် မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီ တွေ မှာ ဘာသာရေး ကို လက်နက် လို သုံးပြီး မအုပ်ချုပ် ရပါဘူး။
မဟုတ်တာ လုပ်တာ ကို ပေါ်မှာစိုးတဲ့ အကြောက်တရား၊ အရှက်တရား တွေ ကို ဦးဆောင်ပေးတဲ့ စနစ် ရှိလို့ပါ။
အဲဒီတွေမှာလဲ အုပ်ချုပ်သူတွေ တိုင်း ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရား အင်မတန် ကောင်းသူ သီလ စောင့် သူတော်စင် တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ရရင်ရသလို ဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့ လူတွေပါ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ မှားရင် အပြစ်ပေးတဲ့ စနစ် က ကောင်းလွန်းလို့ မဖောက်ပြန်ရဲကြတာပါ။
အဲဒီ အပြစ် က မမြင်နိုင်၊ မသိနိုင်တဲ့ နံရံတစ်ဖက် က ငရဲ မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့မှာတင် လူမရွေးဘဲ အရှင်လတ်လတ် ဗျင်း မဲ့ ဥပဒေကောင်း စိုးမိုး ထားလို့ ပါ။
တိုင်းပြည် မတိုးတက်တာ ညီမပြုံး တို့ သူကြီး တို့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဘာသာရေးကြောင့် လဲ မဟုတ်ဘူး။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရင်လဲ လုလု ပြောတဲ့ သီလ ရှိတဲ့ ဘာသာရေးကြောင့် မဟုတ်စေရဘူး။
တိုင်းပြည် တကယ်တိုးတက်ဖို့ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ဘာသာ မရွေး ကျားမ လူ ဘုန်းကြီး မရွေး
မဟုတ်တာလုပ်ရင် အပြစ်ပေးခံရမဲ့ ၊ ဘယ်သူ့ မျက်နှာ ကို မှ မကြည့်မဲ့ မျှတ တဲ့ တရားဥပဒေ ကောင်းကောင်း တစ်ခု ဘဲ အရေးတကြီး လို ပါတယ်။
တတိယလူ စာကလေးကြော် ဝင်ညှော် သွားသည်။ lol:-))))
တကယ်တော့ အဘ များ ဟာလဲ တော်ကြပါတယ်။
ဘုရားစောင်းတန်း တွေမှာ ရေးပြ ဆုံးမ ထားတဲ့ ဆီပူ ငရဲ ကို မကြောက် ဘဲ (မယုံ လို့ ပေါ့) လက်ရှိ လောကနိဗ္ဗန် အတွက် ခံစားနိုင်ရေး ကိုဘဲ ဦးစားပေးနေတာ မဟုတ်လား။ :D Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်တွေ တိုးတက်တာ/မတိုးတက်တာ.. ဘာသာရေးကြောင့်လို့ သိမ်းကြုံးမပြောလိုပါဘူး…။
“စနစ်ကြောင့်မဟုတ်”… ဆိုတာ… မြန်မာပြည်ကိုပဲ အဓိကရည်ရွယ်ပြောတာ..။
မြန်မာပြည်မှာမှ.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ထေရာဝါဒ(ထေရမဟုတ်) ကိုပြောတာခင်ဗျာ…။ ဆိုတော့… ပြောခဲ့တာနှစ်များးးးပေါက်ခဲ့ပြီ..။
အခုပဲ လက်တွေ့မြင်နေကြရပြီ..။ ပိုပိုပြီးမြင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်..။ “ဘက”ပညာရေးက..မဘသမျိုးဆက်သစ်တွေ.. မွေးထုတ်ပေးနေတာကိုး…။
ထေရာဝါဒရဲ့.. လူတွေအပေါ်.. လူမှုရေး/နိုင်ငံရေး.. အိမ်ထောင်ရေးအထိ ၀င်ရှုပ်နေကြပုံ…။
မြစပဲရိုး says:7Day ထဲ မှာ မဘသ များရဲ့ အမျိုးချစ် သင်ခန်းစာ အကြောင်း ဖတ်ပြီး ဖဘ ထဲက သူငယ်ချင်း နဲ့ ပြောဆိုထားခဲ့တာလေးထဲ က တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
(သူက စစ်မျိုးနွယ်မို့ သူ့ခံစားချက် တွေ နဲ့ ရောမွှေလို့မို့ ကိုယ့်ခံစားချက် တွေ ပါ ရောပေး)
“ဒီလိုကျောင်းတွေမှာ နှလုံးသားထဲ ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုကိန်းအောင်းလာစေဖို့ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်းအမျိုးသားရေးပါပဲ ”
အဲဒီ စာသား တွေက မှားနေတာပါ။
နောက်တစ်ချက်က “ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ လောကအလင်းပရဟိတကျောင်း” ဆိုတာ သတင်းထဲ ပါတာကြောင့်လဲ ဒီလို ဝေဖန်ခြင်းပါ။
သေချာတာကတော့ ဦးဝီရသူ ဟာ ပုံမှန်သာမာန် အမျိုးသားရေး ဝါဒ လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသားရေး ကို နိုးကြားစေဖို့ သူများ ဘာသာတွေ၊ လူမျိုးတွေ ကို ထိပါး စော်ကား ပိတ်ပင်လေ့ ရှိခဲ့တာ မို့ ဒီလို ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒါကို excessive nationalism (သို့) chauvinism လို့ ဘဲ ဆိုရမလားပါဘဲ။
ဒီလိုသူ က မဘသ ကို ဦးဆောင်သူ မို့ မဘသ လို့ နာမည်ကြားတာ နဲ့ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ဝါဒ ကိုဘဲ လုပ်နေကြတာလား လို့ သံသယ စိတ်ပွါးလာကြခြင်းပါ။
နောက်ပြီး မဘသ ဆိုပြီး နာမည်ခံသူ တွေ ရဲ့ အတော်လေး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ လူမျိုးရေး အမုန်းတရား တွေ ကြား နေရတာ လဲ သက်သေခံပါ။
ဒါကြောင့်မို့ လူအများစု ဟာ မဘသ ဆို နှာခေါင်းရှုံ့ လာကြတာပါဘဲ။
တစ်ချို့ ဘုန်းကြီး တွေဟာ ပညာရေး ကို အကြောင်းပြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးထဲ ပါချင်လာ တဲ့ ခြေလှမ်းမျိုး တွေ လှမ်းချင်နေကြသလိုပါ။
ဘုန်းကြီး တွေက အမျိုးသားရေးနိုးကြားဖို့ သင်ကြားမယ် ဆိုတော့ ဘာတွေ ကို သင်မှာလဲ။
လူမျိုး မတူ ရင် ဖိနှိပ်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုးသာ မြင့်မြတ်တယ်လို့ အသိပေးဖို့လား။
သူများ ဘာသာရေး ကို မမှန်ဘူး စွပ်စွဲ ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ က မှန်ကန်တယ်လို့ ပြောချင်သလား။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဘယ်လို အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ ရှိစေချင်လဲ။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို လိုချင်ရင်ဖြင့် ဒီလိုမျိုး ငါတို့ သာ အရေးကြီးတယ်၊ ကြီးမြတ်တယ် လို့ ဆိုချင်တိုင်း ဆိုလို့ မရပါလေ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ဟာ အရေးကြီး သူ တွေချည်းဖြစ်ရမှာပါ။
နောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရဲ့ လမ်း ဟာ မှန်ကန်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကို ဦးစားပေးရမှာပါ။
အဲဒီလို တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်ဖို့ ဘယ်လို လူ တစ်ဦး တစ်ယောက် က မှ ၊ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက် က မှ ဥပဒေ ကို ရှောင်ခွင့် မရှိရပါဘူး။
မနေ့က ဒီက သတင်းထဲ မှာ ဆရာမ တစ်ယောက် က ၁၁နှစ် အရွယ်ကျောင်းသား လေး ကို ဖျားယောင်းတဲ့ တွေ ပို့တာ မိသွားလို့ စာသင်ခွင့်ကို နှစ် အကန့်အသတ် နဲ့ ပိတ်ခံရတယ်။
သတင်းအောက်က မှတ်ချက် တွေထဲ မှာ တစ်ခုက “တကယ်လို့ သာ အဲဒီလို လုပ်တာဟာ ယောကျာင်္းဆရာသာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ထောင်ထဲပို့ခံရမှာ ကျိန်းသေဘဲတဲ့။
အဲဒီလို ပြောတာ မမှားဘူး။
ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တွေကြား မှာ တရားမျှတခြင်း အပြည့်အဝ မရှိသေးတာ ကို ပြနေတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီက တစ်ချို့အမှု တွေမှာ ခုံအဖွဲ့ (လူတန်းစားမျိုးစုံ ပါတဲ့ အကဲဖြတ် အဖွဲ့) က မဲ နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အပြစ်အနည်းအများ ဆုံးဖြတ်တာလဲ ရှိတယ်။
အပြစ်အရမ်းကြီးပြီး ထင်ရှားရင်တော့လဲ တော်ရုံ မလွတ်လောက်ပါဘူး။
ယေဘူယျ သဘော ကတော့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း မှာ လူတိုင်း ညီတူ ညီမျှ ဘဲ ဖြစ်ရမှာပါ။
နိုင်ငံတိုင်း မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေ တွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေ ကို ဖောက်ဖျက်ရင် ကျား/မ မရွေး၊ ဆင်းရဲ/ချမ်းသာ မရွေး၊ လူမျိုး/ဘာသာ မရွေး၊ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မရွေး အပြစ်ဒါဏ် အတူတူပေးသင့်တယ်။
ဒါကြောင့် လူလူချင်းကြားမှာ အမုန်းတရားပွါး အောင် ပြောတဲ့ သူ ဟာ အပြစ်ပေးခံရမယ် ပြောရင် ကျူးလွန်သူ ဘယ်သူ့ ကို မဆို အပြစ်ပေးမှ မျှတတယ် ခေါ်နိုင်မယ်။
သင်္ကန်းဝတ်မို့ ၊ မိန်းမမို့ ဆိုပြီး ချန်ထားဖို့မသင့်ပါ။
ဒါကြောင့် ဒီလို လူလူချင်းခွဲပြီး ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း (မည်သူမဆို) ဟာ တရားဥပဒေ ကို ချိုးဖောက်ရာကျပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် တည်ထောင်ရာ လမ်း မှာ အဲဒီလို အဖွဲ့ တွေ မရှိတာ က တိုင်းပြည် အတွက် ပိုပြီး ကောင်းပါမယ်။
နောက်တစ်ချက် က အဖွဲ့အစည်း တွေ ကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ ကိစ္စ ကို ကြည့်ရအောင်။
လူအများစု က မဘသ တွေ ကို အမြင်မရှင်းဘူး။ စစ်တပ် ကို အမြင်မရှင်းဘူး။
တကယ်တော့ မဘသ ထဲ မှာ ပါတဲ့ ဘုန်းကြီးတိုင်း၊ စစ်တပ် မှာ တာဝန်ထမ်းသူတိုင်း ကို မကောင်းဆိုးဝါးတွေလို မစွပ်စွဲသင့်တာတော့ အမှန်ပါ။
မဘသ ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက် အတွက် ဦးစီး ဦးဆောင် လုပ်နေသူ တွေဟာ အစွန်းရောက်မှု တွေ နဲ့ “ငါ” တွေ များလာတာ တွေ ကို ငြင်းမရပါ မဟုတ်လား။
စစ်တပ် မှာလဲ ရာထူးကြီးသူ ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေ ရဲ့ အာဏာ အလွဲသုံး ပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ နဲ့ ကိုယ့်အကျိုး ကို ယှဉ်လာတာ တွေ ကိုလဲ ငြင်းမရပါ မဟုတ်လား။
ဒါတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာ နစ်နာ နေရတာကိုလဲ ငြင်းမရပါ မဟုတ်လား။
အဲဒီလို ငြင်းမရ ခဲ့ ရင်
ကိုယ် က အဲဒီလို အဖွဲအစည်းထဲက ပေမဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်နေခဲ့ရင်
ဒါတွေအတွက် အပြစ်တင်နေသူ တွေ ကို ပြန်ပြီး အပြစ်တင်နေမဲ့ အစား လက်ခံလိုက်ကြပါ။
ဒါမှ ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေ ကို ရှာနိုင်လိမ့်မယ်။
သူများတိုင်းပြည် တွေရောက်ချိန် မြန်မာ လို့ ပြောလိုက်ရင် အထင်အမြင်သေးခံရတာ ၊ မယုံသကာင်္သလို အစစ်ခံရတာ ခံကြရလေ့ရှိမှာပါ။
ကိုယ်တွေ့ အနေနဲ့ ကတော့ ဒီမှာ အိမ်ဝယ်ဖို့ လျှောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုတာ အထူးစောင့်ကြည့်ခံ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
သူများတွေ ထက် ပိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်ခဲ့တယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာတွေ တစ်ချို့ ကဘဲ ဘဏ်တွေ မှာ အလိမ်အညာ ဇာတ်လမ်း တွေ၊ ငွေကြေး ခဝါချမှု တွေ ကပြခဲ့လို့ ပါဘဲ။
ကိုယ့်လူမျိုးတူ တွေ က မဟုတ်တာ လုပ်ခဲ့တာ မို့ ကိုယ့်ကိုယ်လဲ မယုံသလို အကြည့်ခံ ရတာ ကို ဒေါသထွက် စိတ်ဆိုး လို့ ရမတဲ့လား။
လက်ခံသင့်တာ ကို လက်ခံပြီး မြန်မာတိုင်းဟာ ဒီ လို မျိုး လူလိမ်တွေ မဟုတ်ကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးကြောင်း၊ ပညာတတ်ကြောင်း ကို တတ်နိုင်သမျှ လက်တွေ့သက်သေပြဖို့ဘဲရှိပါတယ်။
ဒီလို လက်တွေ့သက်သေပြရင်း ကောင်းတဲ့ လူတော် တွေ များလာတဲ့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကမ္ဘာ မှာ မြန်မာလူလိမ် တွေ ဆိုတဲ့ နာမည် ပျောက်သွားမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကို စွပ်စွဲသူတွေ ကို ပြန်ပြီး ရိုင်းပြ နေရင်တော့ နာမည်ကောင်း ကို မဖန်တီးနိုင်ဘဲ လူလိမ် က နေ လူရိုင်း နာမည် ပါ ထပ်ဆင့်ရဖို့ ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဒီ နေ့ အစွပ်စွဲခံ ဘုန်းကြီး တွေ၊ စစ်တပ် က လူ တွေ လဲ ဒီလိုပါဘဲ။
ကိုယ့်အမျိုးတူ ထဲ မဟုတ်တာလုပ်နေသူတွေ ရှိတာ ကို အသိမှန်လေး နဲ့လက်ခံပြီး ကိုယ်က ကောင်းအောင် စံနမူနာပြ နေပြဖို့သာပါဘဲ။
ကိုယ့်လူ တွေ မှန်မှန်မှားမှား တစ်ဖက် က မကောင်းပြောသူတွေ ကို ရန်သူ လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့ ကိုယ့်လူကိုသာ မျက်စိမှိတ် ကာကွယ် ဖို့ အဓိက ဆိုရင်တော့လဲ တစ်မျိုးပေါ့။
အဲဒီလို မျက်ကမ်းချစ် တွေ ကို ဖွတ် တွေထဲမှာရော၊ ငှက် တွေထဲ မှာပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အရီးလတ် —
ဟုတ်ပြီလေ၊ အဲဒီတရားမျှတမှုက ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်မျိုး ရှိတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရှင်သန်မလဲ။ ? ? အရီးလတ်သည် မကြာခင်တွင် လန်ဒန်မှ ရှိသမျှရောင်းပြီး မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပလို့ဂျိ။
မြစပဲရိုး says: အဝေး က လှမ်းအော် နေလို့လဲ ရတယ် လေ ညီမပြုံး ရဲ့။ ဘုန်းကြီး မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။ သင်းအုပ်ဆရာ မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။ ဗလီဆရာ မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။
မတရားမှု ကို မကြိုက်တဲ့၊ အမှန်တရား အတွက် ရပ်တည်ပေး ရဲ တဲ့ လူတွေ သာ တဖြေးဖြေး များလာပါစေ။
တရားမျှတမှု ဆိုတာ တစ်နေ့ ရလာမှာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ် တစ်ယောက်ချင်း က စကြတာပေါ့။
I am in :-))))
ခင်ဇော် says: ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒ အပေါ်မှာ အစ်မပြုံး ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးအရာ တခုလောက်ပြောပြပါလားး
အာ့လေး အကျယ်ရေးပါ့လား အမဝင့်။
Sine Sant says: အနတ္တကိုနားလည်ထားတာကိုပြောချင်ပါတယ် ငါပိုင် ငါဆိုင် မဟုတ်တာကိုသိနေရမယ်
အဲ့ သိတဲ့စိတ်ကိုလည်းစွန့် နိုင်အောင် လုပ်ရမယ်
ဆိုပြီးသိထားပါတယ် အပေါ်မှာ အစ်မပြုံး ပြောထားတာတွေက
အတ္တ သဘောတရားတွေပါ အစ်မလက်ခံထားတဲ့ အနတ္တ နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် ဖြစ်နေပါတယ် အယူမှားနေတာပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အရမ်းကိုနက်နဲတဲ့ ဘာသာပါ
အပေါ်ယံ သိရုံလောက်နဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်နေလို့ မရပါဘူးးကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ပြီးးအနက်သဘောကို နားလည်သိထားဖို့ လိုပါတယ် ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: နည်းနည်း ရွှီးလိုက်ဦးမှ- အနတ္တ ဆိုတာက တခြား ဘာသာရေးထဲမှာ မရှိဘူးလေ။ တခြား ဘာသာရေးတွေထဲမှာ အနိစ္စ နဲ့ ဒုက္ခ ပဲရှိတယ်။ အနတ္တကတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာမှာပဲ ရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လို့ မရတာ။ အစိုးမရတာ။
kai says: ကျုပ်ကတော့ အဲဒီ.. အနတ္တ.. မရှိ/မမြဲ/အစိုးမရတဲ့ဟာကြီးကနေ.. နိဗ္ဗာန်သွားရှာနေတာကိုက.. မှားတယ်လို့.. မြင်တယ်…။
ဘာမှအစွဲမရှိချင်ရင်.. အပင်ပန်းခံပြီးတရားရှာ.. တရားထိုင်မနေနဲ့.. ဆူဆိုက်လုပ်လိုက်ပေါ့..။
သေခါနီး ဇောကျတာလေးကောင်းအောင်.. ဘိန်းလေးပါရှုလိုက်…။
အဲလို…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
Sine Sant says: မန်းဂဇက် သူကြီးမင်း
ကျနော့်တင်ထားမိတဲ့ ပိုစ့်တွေ အကုန်ဖျက်ပေးပါ ကျေးဇူးပြု ၍
သည်ဆွေးနွေးတာတွေထဲ.. ဘယ်သူမှမှန်တယ်.. မှားတယ်ရယ်မရှိ.. အချိန်ကအဆုံးအဖြတ်ပေး.. အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ.. ဖတ်တဲ့သူ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစား.. အဲလိုဖြစ်အောင်ထားရစ်တာချည်းပါပဲ..။ ဒီလိုနဲ့..ရေးသူ/ဖတ်သူ အတွေးအခေါ်တွေ အရောင်တင်ဖြစ်အောင်.. ထားတာချည်းပဲ..။
စိတ်ရုပ်.. ဖြစ်တဲ့နေရာပျက်တာချည်း..။ အနတ္တ.. အစိုးမရ..။
စိတ်တိုင်းရဲ့သက်တမ်းဟာ ဥပါဒ်၊ဌီ၊ဘင် ဆိုပြီး ခဏငယ်သုံးချက်ပဲရှိပါတယ်။ ၀ီထိ.. စိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်စေဦး…. ဖြစ်တည်ပျက်.. အဲလိုသွားတယ်..။
ကွန်ပျူတာမှာဆို.. သုံညနဲ့တစ်.. ။ သုံညနဲ့တစ်ကနေ..Visual လောကဖြစ်လာတယ်..။
ဥပါဒ်၊ဌီ၊ဘင် ကနေ.. တကယ့်လောကကြီးဖြစ်လာတယ်..။
အဲဒီထဲ.. ချစ်ရွှင်သနား တည်ကြားကြမ်းကြုတ်. စက်ဆုတ်ကြောက်ရွံ့ ရဲဝံ့အံ့သြ. နောအရသာတွေဖြစ်လာတယ်..။
ဒါတွေကို ပရမတ်သစ္စာအခြေပြု.. အနတ္တ၀ါဒအရ.. ဘာမှမမြဲ.. ဘာမှမဟုတ်..သူ၊ငါ၊ယောက်ျား၊မိန်းမမဟုတ်.. ဖြစ်တည်ပျက်ချည်းဆိုပြီး.. ဥပါဒ်၊ဌီ၊ဘင် အထိသွားကြည့်ပြီး.. အသိတွေ.. ပယ်ဖျက်တယ်..။ အစွဲတွေဖြုတ်တယ်../ဖြတ်တယ်..။
အနတ္တကိုယုံကြည်ရင်.. အခုစာတွေကို သုံညနဲ့တစ်.. စာတွေပဲ..ဆိုပြီး.. ခံစားချက်တွေမထား.. ဖြတ်လိုက်ပါ..။ သဘောမတူဘူးလို့ရေးလိုက်ပါ..။ ကိုယ့်အယူအဆကို ရေးချပါ..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခြစ်စိုင်းဆင့်လေးနဲ့ ဦးကြောင် တသဘောထဲရှိတယ်။ မသိလို့ မွပ်ဂဇက်နဲ့ ပက်သက်မိတာ။ အယာတိုလာ ခိုမ်မေနီခင်ဗျား.. ကျုပ်ရေးထားတဲ့ မှက်ခြက်၊ ပို့စ်တွေအားလုံး ဖျက်ပေးပါ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သဂျီးနဲ့ မျှစ်ကြော် အမြင်ချင်းမတူတာ တော့ အဲဒါ ရှိတယ်။ သဂျီးက နောင်ဘ၀ မယုံဘူး။ မျှစ်ကြော်က ယုံတယ်။ ကံသတ္တိ စွမ်းအင်ကို ချေဖျက်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ခ၀င်ပုံပြင်တွေ မဟုတ်က ဟုတ်က ဇာချဲ့လွန်းတော့ အဲဒီကနေ နတ် နဂါး ဂဠုန် စတာတွေက အဲဒီကနေ စတာ။ အဲဒီကနေ ဧရာမ အတုပြုလုပ်ခြင်းကြီးလာမယ်။ အဲဒီကနေ ဘရိန်းဝပ်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် နစ်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ ဘာသာရေးအမြင်က သိပ်ပြီး ဖြူစင်လွန်းတော့ မည်းလွယ်တာပေါ့။ သိပ်ပြီး အဖြူထည်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတော့ ညစ်လွယ်တာပေါ့။ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်ရှင် နေထိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ သီလတွေ လုံလို့ကို မရဘူး။ ချိုးဖောက်ရမယ်။ ဒါမှ ရှင်သန်မယ်။
kai says: မှားတယ်မျစ်မမရေ…
ကျုပ်က..ရှေ့/ နောက်ဘ၀အယူကို.. မယူဘူး..။
တပြိုင်ထဲ.. တတ်ထားတဲ့သိပ္ပံနည်းပညာတွေအရ.. ရှေ့/နောက်ဘ၀ရှိနိုင်မရှိနိုင်လည်း.. သုတေသနလုပ်ကြည့်တယ်..။
ဒါပေမယ့်… ထပ်ပြောမယ်.. .ရှေ့/ နောက်ဘ၀အယူကို.. မယူဘူး..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကာယ ဝစီ မနော မည်
ရောင်တော်ပြန်မှာ (ဝိမုတ်တိသာသနာ တပတ်လည်ချိန်)
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ကိုယ်တိုင်တော့သိပ်မပြောတတ်ဘူး…အဓိပ်ပါယ်မရှိတာတွေတော့လုပ်လေ့မရှိပါဘူး…ဒါလေးတော့သဘောကျလို့.. ကုသိုလ်အတွေး ကုသိုလ်အရေး
June 8 at 4:52am ·
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈၅% ရှိတဲ့ထဲမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီသသ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်
ဗေဒင်လဲ မမေးဘူး ။
ရတနာမြတ် ၃ ပါး ကိုသာ အလေးထားတယ်။
ဘုရားရောက်တဲ့ အခါ ဘယ် နေ့နံဒေါင့်မှာမှ
ရှိခိုးမယ်လို့လဲ အစွဲမရှိဘူး..။ ကြီး ၄ ကြီး၊
ကြီး ၉ ကြီး လဲ ပုတီးသွားစိပ်တာမျိုး မရှိဘူး..။
ပုဂံ က စွယ်တော် ၄ ဆူ နေ့ချင်းဖူးရင်
ဆုတောင်းပြည့်တယ် တို့၊ ချမ်းသာတယ်တို့
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား တစ်နှစ်ထဲမှာ ၃ ခေါက် တက်ရင်
ချမ်းသာတယ်တို့ လဲ အယူမရှိဘူး..။
ဘုရား ဆိုရင် ဘယ်နေရာက
ဘုရား၊ စေတီ၊ ဆင်းတုတော်ကိုမဆို
၅ ပါး သီလ ကိုထိန်းမယ်။
၈ ပါး သီလကို အခါအားလျှော်စွာ စောင့်ထိန်းမယ်။
နေ့စဉ် တရားထိုင်၊ တရားအားထုတ်မယ်..။
အဲ့လို လူတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ
လူဦးရေ သိပ်များမယ်.. မထင်ဘူးနော်..။
ကံ ၊ ကံ ၏အကျိုး (ကံ=စေတနာ=အလုပ်)ကို
မယုံဘဲ မင်္ဂလိက ဒိဌိ၊ အယူအလွဲတွေကိုသာ
ယုံကြည်နေကြရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မစစ်ဘူးပေါ့..။
အညံ့စား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပေါ့ ..။
“ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီသသ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ”
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏
ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း (၂၃-၃-၂၀၁၂) တရားတော် ကောက်နုတ်ချက်
ဒေါ်မေအေးဦးထံမှ ကူးယူမျှဝေ ပါသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အဲဒီ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံပြီး လက်တွေ့ဘ၀ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ကြလို့ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းတွေနဲ့ အသာစီးရသွားတဲ့ သူတွေ ကြိတ်ဟားနေကြတာ။ တပြည်လုံးကို။ ဒီပြည်ကလေ သူတော်ကောင်းတွေ များလွန်းလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ လက်တစ်ဖက်ချင်း မျက်လုံးတစ်လုံးချင်း လက်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့လူ ရှားတယ် ။ လူများစုရဲ့ သဘောထားအတိုင်း တိုင်းပြည်ဟာ ဖြစ်တည်ပေးလိုက်ရတာပါ။
ကထူးဆန်း says: ဟိ .. ပျား အုံ တော့ ဒုတ် နဲ့ ထိုး လိုက်ပြီ သူ ကြီး ထိပ် တက် ကပ်ဘူး လား .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ခုတောင် ၀င်ဖတ်တဲ့လူတွေ များလို့။ ဖဘကနေ မေးနေတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို ဘွဲ့ တစ်ခု ပေးလိုက်ပြီ။ တစ်ခြမ်းရူး တဲ့။
kai says: ဒီရက်ပိုင်းတွေက.. မြန်မာအစိုးရထဲကသူတွေ တက်ဖတ်နေမယ်ထင်တာပဲ..။
သိစေ.သိစေ.. သိကြစေ..။ ဆဲကြစေ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းတာကို ရှက်စရာလို့လည်း သဘောထားသင့်ပါတယ်။ ဘုရားကို အားကိုးတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ လူသားတန်ဖိုးကျတယ်။ မတတ်သာလို့ ဆုတောင်းရင်လည်း အနည်းဆုံးကို တောင်းသင့်ပါတယ်။ ဟို မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ကြီးက ဘယ်လိုမှကို အဓိပ်ပါယ် ရှာမရဘူး။ လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ ဆိုတာလေ။ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မှာတုန်း။ တစ်ကောင့် တစ်ကောင် စားသောက်နေထိုင်ရတဲ့ လောကကြီးမှာ။ မြန်မာတွေ စားတဲ့လူမှာ အပြစ်မရှိဘူးပြောတယ်။ ဒါဆို ကြက်ကို လည်လှီးသား စားလေ။ ဒါကျတော့ မစားဘူး။ လည်လှီးသားက အသားတွေ ဖြူရော် နေတယ်။ အသားလှအောင် ကြက်ကို အရှင်လတ်လတ် ခြေနှစ်ချောင်းကကိုင်ပြီး ရေနွေးထဲထည့်နှစ်သတ်တဲ့ ကြက်မှ စားကြတယ်။ အဲ့လို။ သတ္တ၀ါကို သက်သက်သာသာ သေအောင် လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ငါးပါးသီလ ကြေငြာတယ်။ ဘာလို့များ အကုသိုလ် ကုသိုလ်ကို တရားမျှတတ မယူကြတာလဲ။ ငရဲရမယ်ဆိုရင် ငရဲကို မျှမျှတတ ဝေခွဲ ယူရမှာပေါ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟေဟေး . . . အဲဒီမှာ တွေ့တာပဲံ . . . ဟိုဘာသာတရားမှာ လည်လှီးတယ်ဆိုတာ သတ္တဝါတွေကို ခံစားမှုအနည်းဆုံးနဲ့ သေစေချင်တာကြောင့်ရယ် . . . နောက် မူလအစက အပူပိုင်းဒေသဆိုတော့ လည်လှီးမှ သွေးကတစ်ဆင့် ပိုးတွေပါသွားမယ် ဆိုတာကြောင့်ရယ်လို့ မှတ်ထားဖူးတယ်. . . သူတို့လည်း အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကြောင့် ဘရိန်းဝက်ခံကြရတာပဲ . . . ဟိ. .
kai says: ဂျပန်မှာ.. တူနာ(မာဂုရိုး) ဖမ်းရင်.. ဖမ်းတဲ့သင်္ဘောတွေမှာ.. မိတာနဲ့.. ခေါင်းဖြတ်.. တွဲလောင်းဆွဲ.. သွေးတွေထုတ်ပစ်ပြီးမှ.. အရမ်းအေးတဲ့ဓတ်ငွေ့နဲ့.. အေးခဲပစ်တယ်..။
အဲဒီအအေးခဲတုံးတွေကို.. ဈေးကွက်တင်ပြီးမှ.. တနိုင်ငံလုံးစားတဲ့ ဆာရှိမိ..။ဆုရှိလုပ်တာ..။
ဆုရှိ အဖြစ်အသားစိမ်းကို လှီးဖြတ်ရင်.. သွေးပါမပါစစ်ရတယ်..။
သွေးကြောလေးတွေထဲ.. သွေးကျန်နေရင်( အနီစင်းလေးတွေထင်ရှားနေရင်) အဲဒီငါးအသား.. ဆာရှိမိစားလို့မရ..။
အအေးကနေ.. သဘာဝအပူချိန်ထားတာနဲ့.. အဲဒီကျန်တဲ့သွေးတွေက..မြန်မြန်ပုပ်လိုက်လာလို့ပါ..။
ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက.. အကောင်သေရင်.. သွေးကအရင်ဆုံးပုပ်ပျက်သွားတယ်..။
အဲဒီသွေးတွေကို သတ္တ၀ါခန္တာထဲက..တတ်နိုင်သလောက်ထုတ်ထား..။ အဲဒီအသားက စားကောင်းတယ်..။ ရောဂါကင်းတယ်..။
ယူအက်စ်က.. စက်ရုံထုတ်ကြက်၊၀က်၊နွားတွေ အဲလို ခေါင်းဖြတ်.. တွဲလောင်းဆွဲသွေးထုတ်ထားကြတာ။။။
ဒါကလည်း..ထည့်တွေးရမယ့် တချက်လို့ထင်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
sorrow says: ..ဒီလောက်ဘာသာရေးအကဲဆတ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ …ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့အမြင်ကို
..တစ်ဖက်လူမထိခိုက်တာတောင် ချပြဖို့တောင်…ဘာသာခြားနဲ့ဘာသာမဲ့တွေမှာ ..အခွင့်အရေးတစိုးတစိမှမရှိ…ကိုယ့်ကိုလာထိရင်တောင် အိလို့မအော်နိုင်….ဆိုတော့ကာ….၀င်ပြောချင်သော်ငြား…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အဲဒီ တစ်ချက်တည်းနဲ့တင် ဒီဘာသာရေးဟာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ သေချာသွားလို့ BC ပေးတာပါ ကိုဥာဏ်ကောင်းရေ
မြစပဲရိုး says: ညီမ ပြုံး ရေ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ အဖွဲအစည်း တစ်ခုခု ကို ပြောဆိုဝေဖန်ကြ ရင် ဝါလုံးရှည် နဲ့ ရမ်းတတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ အရိပ်ကြီး ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ ကနေ ပြသနာ ကို အဖြေရှာ လို့ မရပါဘူး။
အကြောင်းတစ်ခု ဆိုရင် ကိုယ်မြင်တဲ့ အပိုင်းလေး ကိုဘဲ ဆွဲ ယူဝေဖန်လိုက်တာ ဟာ အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။
ကိုယ့် အမြင်အတွေး ကို မပြောရ၊ မဝေဖန်ရ မဟုတ်ပါ။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည် (သို့) အဖွဲအစည်း တစ်ခု မှာ လူတစ်ယောက်ချင်း ဆီက အမြင် အတွေး တွေ ဟာ အင်မတန် အဖိုးတန်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်အတွေး ဖြစ်စေ၊ အဆိုးမြင်အတွေး ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ရမဲ့ လမ်းကြောင်း မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးနိုင်ခဲ့ ရင် ပိုမိုကောင်းတဲ့ ရလာဒ် ရပါတယ်။
ဦးဆောင်သူဟာ လိုရင်ယူ၊ မလိုရင်ဖယ် ဖို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်တော့ ရှိရမှာပေါ့။
ဘာသာရေး ဆိုတာ အာဏာရှင်စနစ် ဆိုတာ တစ်ချို့ အကြောင်းအရာ တွေ မှာ မှန်နိုင်ပါတယ်။
သို့ပေ မဲ့ အဲဒါ ကို ဝါးလုံးရှည်ရမ်းအမြင် နဲ့ ဝေဖန်ပြီး ပြောလို့ မရပါဘူး။
ငရဲ နဲ့ ခြောက်တာ နဲ့ တော့ အာဏာရှင်စနစ် လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဲလို ခြောက်တိုင်းသာ ကြောက်တတ်ကြရင်ဖြင့် ရွှေပြည်ထဲ မှာ မကောင်းမှု ဆိုတာ ရှိမှာ ကို မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီတစ်ချက်ထဲ နဲ့ တင် ငရဲ နဲ့ ခြောက်တဲ့ ရွှေပြည်က ဘာသာရေး အာဏာရှင်စနစ် ခမျာ တော်ရုံလူ မကြောက် တဲ့ ငပေါကြီး ဖြစ်နေရှာတော့တယ်။
အခုလဲ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီး တွေ ကို ပြောဆိုဝေဖန် နေကြတာဘဲ။
အရင်က ဖွတ်အစိုးရ ကို ကြောက်လို့သာ သိပ်မပြောရဲတာ။
အခုတော့ ပြောရဲ တာမှ အစွန်းထွက် ဆဲဆိုတောင် နေကြသေး။
နောက်ဆို ဘုန်းကြီး တွေ ထဲ အစွန်း အညစ် တွေ ရှင်းပစ်လိုက်နိုင်ရင် ဗုဒ္ဓတရား အစစ် တွေ ပြန်လည် နေရာရလာကောင်းပါရဲ့။
အာဏာရှင်စနစ် ကို ဦးဆောင်နေတာ ဘာသာရေး မဟုတ်ပါ ညီမ ရယ်။
လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေး ရဲ့ ရင်ထဲ မှာ ခိုဝင် တွဲ နေတဲ့ “ငါစွဲ” “အတ္တ” “လောဘ” “မောဟ” “ဒေါသ” တွေ က သာ အာဏာရှင်စနစ် ကို လမ်းပြ ရှေ့ဆောင်နေခြင်းပါ။
ဘာသာရေး ဆိုတာ အဲဒါတွေ ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘဲ။
အဲဒီ “ငါစွဲ” “အတ္တ” “လောဘ” “မောဟ” “ဒေါသ” တွေ ကို ဖြတ်ဖို့ ဘာသာမဲ့ ဆိုတဲ့ လူ တွေ လဲ တတ်နိုင်ကြပါတယ်။
အင်မတန် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ ပြီး မေတ္တာ စိတ် ပြည့်ဝ တဲ့ ဘာသာမဲ့ တွေ လဲ ရှိပါတယ်။ မြင်ဖူး သိဖူးပါတယ်။
အင်မတန်ရိုင်းပြ တဲ့ ဘာသာမဲ့ တွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ဘာသာရှိသူ တွေ ထဲလဲ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ သူတွေ ရှိကြ သလို ရိုင်းပြ သူ၊ အမုန်းတရား အာဃာတကြီး သူ တွေ လဲ အများအပြားပါဘဲ။
ဘာသာရေး ဟာ လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်ကြံ မှု မရှိရင် တကယ်တော့ စကားလုံးမျှသာပါဘဲ။
မြစပဲရိုး says: ညီမပြုံး အကြောက်တရား အတွက် ငရဲ မပါတဲ့ တရားပါ။
မဟုတ်တာ၊ မတရား တာ လုပ်ရမှာ ကို ရှက်လာ၊ ကြောက်လာသူ တွေ များလာတဲ့ တစ်နေ့ တရားမျှတ ဆိုတာ ရှေ့တန်းရောက်လာမှာပါ။
အဲဒီအချိန် တို့များရဲ့ ချစ်သော ရွှေပြည် ကြီး လဲ ကမ္ဘာမှာ နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ ပျော်စရာ အရပ်ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီရွာထဲ စကားသမိုင်း ချန်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ စာမျက်နှာ ကို ပြန်လှန်ပြီး “ဒီမှာ တွေ့လား” လို့ ပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့။
❀﻿ စိတ်ကြည်လင်ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဟိရီသြတ္တပ္ပဆိုတဲ့ တရားကို ရှေးဦးစွာ တည်ဆောက်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဖြစ်စေရမယ်။
❀﻿ ဟိရီဆိုတာ မဟုတ်တာလုပ်ရမှာ ရှက်တယ် အဲဒါကို ပြောတာနော်၊ ရှက်တယ်ဆိုတာ လူတွေမှာ လူကြားထဲ စကားပြောရမှာ ရှက်တာတို့၊ ဟိုသွားရမှာ ရှက်တာတို့ ဒါမျိုးတွေ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။
❀﻿ မဟုတ်တာလုပ်ရမှာ ရှက်တယ်၊ မဟုတ်တာ ပြောရမှာ ရှက်တယ်၊ အကုသိုလ် ဒုစရိုက်တွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာကို ရှက်တယ်၊ ရွံတယ်၊ အကုသိုလ်မှန်သမျှကို မုန်းတီးတယ်၊ အဲဒါကို ဟိရီလို့ခေါ်တာနော်။ အကုသိုလ်ကို ရှက်ဖို့လိုတယ်။ မရှက်လို့ အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။ အကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင် ဒါ မရှက်လို့လုပ်တာပဲလို့ ပြောရမှာနော်။
❀﻿ လူတွေက အဲဒါကို မသိကြတော့ လူကြားထဲမှာ ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ရင် အရှက်မရှိလိုက်တာနဲ့ ပြောကြတာနော်။ တကယ်က အရှက်မရှိဘူးဆိုတာ ကာယဒုစရိုက် ဝစီဒုစရိုက် မနောဒုစရိုက်တွေကို ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ဖြစ်ခွင့်ပေးထားရင် အရှက်မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပဲ။ အရှက်မရှိဘူးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည်ရမယ်။
❀﻿ အရပ်ထဲမှာ အရှက်မရှိဘူးဆိုတာ မလုံမခြုံဝတ်တာကို အရှက်မရှိဘူးလို့ ပြောချင်ပြောမယ်၊ လူကြားထဲမှာ ဟို လမ်းပေါ်မှာ ထွက်ပြီးတော့ ရန်ဖြစ်ရဲတာတို့၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်းဖြစ်အောင် ဆဲဆိုတာ ကြားမကောင်းရှုမကောင်းအောင် ဆဲတာဆိုတာတို့ အဲဒါမျိုးတွေကျတော့ အရှက်မရှိဘူးလို့ ပြောကြတာ။
❀﻿ အရှက်မရှိဘူးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က
ကိုယ့်သန္တာန်မှာ အကုသိုလ်တွေ အဖြစ်ခံနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ အရှက်မရှိဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာနော်။ ဘာကိုမရှက်တုန်းဆိုတော့ အကုသိုလ်ကို မရှက်တာလေ။အခုဟာ လူတော့ ရှက်ချင်ရှက်မှာပေါ့၊ အကုသိုလ်ကို မရှက်တာ။ အဲတော့ လူရှက်တာက တစ်မျိုး၊ အကုသိုလ်ကို ရှက်တာက တစ်မျိုး၊ အဲဒီနှစ်ခုကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့ရယ်၊ အကုသိုလ်ကို ရှက်ဖို့လို့တယ်။ အကုသိုလ်ကို ရှက်တာ၊ စက်ဆုပ်တာကို ဟိရီ လို့ ခေါ်တယ်။
ု❀﻿ သြတ္တပ္ပဆိုတာကျတော့ အကုသိုလ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ လန့်တယ် ကြောက်တယ်။ လန့်တယ် ကြောက်တယ်ဆိုတာ အကုသိုလ်ကိုမိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်လာမှာကို ကြောက်တာ။ အကုသိုလ်
မိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင် ခံရမယ့် အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း ကြောက်တယ်ပေါ့။
❀﻿ စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာ ထင်ရှားအောင် ဥပမာတစ်ခု ပြောထားတယ်။ သံတုံးကြီးတစ်တုံး ဆိုပါစို့၊ တစ်ဖက်က မီးဖုတ်ထားလို့ ရဲနေတယ်၊ ဟိုတစ်ဖက်ကလည်း မစင်အညစ်အကြေးတွေ လူးနေတယ်၊ မစင်အညစ်အကြေးတွေ လူးနေတဲ့ဘက်ကိုလည်း မကိုင်ဘူး၊ ဘာပြုလို့တုန်းဆိုတော့ ရွံလို့၊ မီးထိထားလို့ ရဲနေတဲ့ဘက်ကိုလည်း မကိုင်ရဲဘူး၊ ဘာလို့တုန်း၊ ပူမှာကြောက်လို့၊ လောင်မှာကြောက်လို့ မကိုင်ချင်တာချင်းတော့ အတူတူပဲပေါ့။
❀﻿ အဲဒီတော့ အကုသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရွံလို့ မလုပ်တာရယ်၊ ကြောက်လို့ မလုပ်တာရယ်၊ မလုပ်တာချင်းတော့ အတူတူပဲပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်က အကုသိုလ်ကို ရွံလို့ မလုပ်တာကတစ်ခု၊ ကြောက်လို့ မလုပ်တာကတစ်ခု၊ အဲဒီနှစ်ခုကို မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ရှေးဦးစွာ ဆောက်တည်ရမယ်တဲ့နော်။
(ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် နန္ဒမာလာဘိဝံသ)
ဦးဦးပါလေရာ says: သူကြီးတို့ ဆရာမပြုံးတို့ စသည်တို့က သူ့အမြင်သူ့အတွေးနဲ့သူပါ..၊
ကိုယ်တွေနဲ့ မတူဘူးဆိုလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အိုကေကြပါတယ်..။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာတွေအပေါ် မကြေမညက်ကလေးတွေရှိတတ်တယ်..
အစကတော့ ဒီဆိုက်က ဘာသာရေးသိပ်လက်မခံဘူးလို့ နားလည်ထားလို့ ဘာမှသိပ်မပြောဖြစ်..
ဆိုတော့ ပိုစ့်လေးတွေ တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
မြစပဲရိုး says: မြန်မာပြည် မှာ တကဲ့ သူခိုးကြီး တွေ ထင်းထင်း ရှိနေတာ ကို မြင်နေရတဲ့ အချိန်
အဲဒီ သူခိုးကြီး များ က သင်္ကန်းရုံ လဲ မဟုတ်ပါဘဲ နဲ့
သူကြီး နဲ့ ပြုံးညီမ ရဲ့ မြန်မာပြည် မတိုးတက်တာ “ဘာသာရေး” ကြောင့် ဆိုတဲ့ စွဲချက် က
ကျွန်မ နဲ့ ထိပ်တိုက် ဒဲ့ အတွေးမတူ တာ မို့ အဲဒါ ကို ဝင်ဝင် ပြော ကြည့်မိတာပါ။
ကျန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအချက် တွေ ကတော့ ကိုယ်လဲ ဉာဏ် လိုက်မမှီပါဘူး။
ကိုပါ ပြောတာ နားထောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ :-)))
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျနော် တော်တော်လေးစားပြီး
တစ်စက်မှ (လုံးဝ လုံးဝ) သဘောမတိုက်ဆိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးရှိခဲ့ဘူးပါတယ်..
သူနဲ့ သူ့ဆက်ခံသူများ အတွေးအခေါ်ကလဲ အဲသည်လိုပဲလို့ထင်ပါတယ်..၊
ဆိုချင်တာက ဒီလိုယူဆချက်မျိုးက အပြင်ကမဟုတ်ပဲ အတွင်းမှာတင်ရှိတယ်
ကြာလဲကြာပြီ ၊ သိပ်လဲ မနည်းလှပါဘူး..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဦးပါ။ အဲဒီ ဘုန်းကြီးအကြောင်း မသိသေးဘူး။ ဦးရွှေအောင်တို့ ။ ဦးဌေးလှိုင် တို့ရေးတာတွေတော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တစ်ဘ၀သာသနာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျမ ပြဿနာက အင်္ဂလိပ်ပိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ အာဏာရှင်စနစ် အကြောင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က မာ့စ်တွေ ဘာတွေ ခိုးဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အမေက လွှင့်ပစ်လိုက်လို့ စာတော့ မကျေ။ မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်း အခွင့်ရတိုင်း လေ့လာပါတယ်။ အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော – မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာ မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်နေပါတယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲဒီဆရာတော်ရဲ့ စာတွေ အများကြီး မဖတ်ဘူးပေမယ့် ၂ ချက်ထဲနဲ့တင် မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ လိုက်မဖတ်ကြည့်တော့တာ…
(၁) စိတ်က အမြဲပြောင်းလဲနေလို့.. မတည်မြဲဘူး… အဲဒါကြောင့် ပရမတ္ထတရားထဲ မထည့်သင့်ဘူး….
(၂) သရက်စေ့ကနေ စပျစ်ပင် မဖြစ်နိုင်ဘူး.. လူသေရင် ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး.. ပြန်ဖြစ်ရင်တောင် လူပဲ ဖြစ်မယ်…
ဦးဦးပါလေရာ says: ဇာတ်နိပါတ်တွေ
အဲဒါ…. အဲဒါ….လေးတွေ နဲနဲစီ တို့ကြည့်မယ်စိတ်ကူးတယ်..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကြိုဆိုပါတယ် ဦးနှောက်ကနေ စလှန်၇မှာ။
ခင်ဇော် says: ဘာသာရေးး ကို ဒါးးထမ်းး ဆွေးနွေးးဂျပါဇို့..!!
Wow says: အလွတ်သဘောဝင်ရန်စရရင် ….. အဲလေ ဆွေးနွေးရရင် မဝင့်လဲ မဝင့်အပြစ်ပြောနေတဲ့ ဗုဒဘာသာတွေလို အစွန်းရောက်တာပဲ
ကျနော်ကတော့ကြက်အုတွေ့ရင် အစရှာနေမယ့်အစား ကျော်စားလိုက်တာပဲ အဲ့တော့ မဝင့်လဲရှိတဲ့အုကြော်စား အဲလေ.. နှာသီးဖျားက ဝင်လေထွက်လေလေး အရင်မှတ် ကိုယ်ဘာစိတ်အာရုံညွတ်နေလဲတွေးကျိ…
အပြစ်တင်တာက ပြသနာတစ်ရပ်ပြေလည်သွားစေတယ်တော့ ကျနော်မထင်ဘူး
မြန်မာမိန်းခေးဒွေဒါတော့ဖြစ်နေပါပြီဆိုပီး အမျိုးစောင့်ရှောက်သူတအူးဆိုပီး စကတ်အတိုဝတ်ကောင်မလေးတွေပုံ တင်နေမင့်အစား ဒေါ်စု ကမ္ဘာပတ်ပီး ထမီဝတ်ပြလိုက်တယ် …
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟုတ်ပြီလေ။ ဒါပေမယ့် ၀ိပဿနာမှတ်လို့ တရားတွေ့ရင် – ဖြစ်ပျက်မြင်ရင် ဘာဖြစ်လို့ သူများကို အမှန် အတိုင်း ပြောခွင့်မရှိတာလဲ။ တွေ့ရင်တောင် တွေ့တယ် မပြောရဘူး ဆိုတာ မုသာဝါဒ မှုတ်ဘူးလား။
ထားပါတော့။ ခုလည်း နှမ်းတစ်စေ့ ဖြစ်ချင်တာပါပဲ။ အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ သွေး ကြောကိုသိမှ အမြစ်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
Wow says: မဝင့်ကို တွေ့ရင်တွေ့တယ်မပြောရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။
သိဒ္ဓထက ဘာကြောင့် ဘုရားဖြစ်သွားလဲ၊
သူကသိသွားတာ၊ လူတွေပြောကြသလို သဗေညုတဥာဏ်ရသွားတာ၊
ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အတန်းပညာမှာတောင် သူငယ်တန်းကလေးကို ဟိုက်ထရိုဂျင်ဗုံးထုတ်တဲ့အီကွေးရှင်းတွေ သိပါစေဆိုပြီးရှင်းပြလိုရလား။
ဗုဒ္ဓကို ကျနော်လေးစးတဲ့အချက်က ခန္တာကိုယ်တွင်းသုံးဆယ့်နှစ်ကောထာသကို အခုခေတ်ဆို Anatomy ပေါ့ အဲ့ဒါကို သူထိုင်ပြီးသိသွားတာ၊ တခြားရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားနဲ့ ကိုယ့် anatomy ကိုယ် မခွဲစိတ်ရပဲသိသွားတာ။
အဲ့တော့ မဝင့်မေးတာပြန်ဆက်ရရင် ဖြစ်ပျက်မြင်တယ်ဆိုတဲက မဟုတ်ဘူးဗျ၊ အာ့တွေကများသောအားဖြင့် illusion ဖြစ်နေတတ်တယ်။
တကယ်က ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး တခုခုလေးသိလာရမှာ။ ကျနော်တို့စာသင်သလိုပဲ့ ပြန်စဉ်းစာကြည့်။
ဆိုတော့ အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်ဆိုသလို illusion တွေကို ကိုယ့်ပါးစပ်ကထုတ်ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်က အမှန်လို့ထင်လာတတ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အဖို့လဲထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်တယ်။ အဲတာက ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။
ဆိုတော့ သူငယ်တန်းသမားကတော့ နေ့ခြင်းညခြင်းဖြစ်ပျက်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ technically ကောက်ချက်ချနိုင်သပေါ့ဗျာ။
kai says: Wowမမက.. တရား ၀င်ဆွေးနွေးရေးနေလို့..အံ့သြနေတာ..။
ဒီလောက်ပဲ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဒဂျီးနောက်တစ်ခေါက်လာရင် ဂဒုံးတုံးပြီး camp သွင်းမလို့…
ဒီလောက်ပဲ Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ယူအက်စ်မှာတော့.. ဂတုံးskinhead တွေဂိုဏ်းက … ကြောက်စရာ…။
Camp ထဲများနေမယ်ဆို.. ပိုဆိုးသေး…။ Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: ..ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့လေ….ဒီရွာကလူတွေက လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့​လစ်ဘရယ်အမြင်ရှိနေလို့ …ပြီးတော့ ..အစစ်အမှန်ဘာသာရေးကိုသိနေလို့
( 26 August 1961)​ရက်နေ့​…(အမှတ်မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ် )
..နိုင်ငံတော်ဘာသာပြဌန်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ..ဘာသာခြားလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအင်အားပိုကြီးလာတာ…ငြင်းမရတဲ့အမှန်တရားပါပဲ …
မြစပဲရိုး says: မောင်စောရယ်
အဲဒီလို ဘာသာရေး တွေ ကို စိတ်ထင်သလို ချယ်လှယ်နေကြတာ “လူ” တွေ ရဲ့ အတ္တတွေ၊ ငါစွဲ တွေ ကြောင့်ပါ။
လောကကြီး ထဲ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်လူမျိုး ထဲ မှာ ပြသနာမရှိ တဲ့၊ အင်မတန်အေးချမ်း တဲ့ အခြေအနေ ရှိနေလို့လဲကွယ်။
အုပ်ချုပ်သူများ ရဲ့ ပညာဉာဏ်ရည် ပြည့်ဝမှု နဲ့ လူ တွေ ကို စနစ် က ထိန်းချုပ်မှု အားကောင်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း ပေါ်ကိုလိုက်ပြီး ပြသနာ အနည်းအများ၊ အသေးအကြီး ကွာသွားခြင်းပါ။
အင်မတန် တိုးတက် နေပါတဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံ တွေမှာ ဂေါက်လူ တွေ ခေါင်းဆောင်ဖို့ အခွင့်ပေးကြည့်ပါလား။ (အခု ဒေါ်နယ် လို လူမျိုးပေါ့)
ပြောင်းပြန်ဆန်ခတ် အမုန်းတရား တွေ လွှမ်းသွားတဲ့ မြေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အခုလဲ တူရာ ဘာသာတရား တွေထဲ မှာ ကို အကွဲ အပြဲ တွေ နဲ့ စစ်ဖြစ်နေကြတာ။
ခရစ်ယာန် နဲ့ အစ္စလာမ် ဆိုတာ ဘုရား တစ်ပါးထဲပါ။
အဆုံးအမ တစ်ခု ထဲ က ဆင်းသက်လာတာပါ။
စစ်ပွဲ တွေ ဖြစ်နေတာ ဘာသာရေး အတွက်လား၊ မြေလုပွဲ လားတောင် မသေချာတော့ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလဲ နောက်ဆုံးပွင့်တဲ့ ဘုရား ရဲ့ စကားတွေ ကိုးကားရင်း ရန်ဖြစ်နေကြတာပါ။
ဘာသာရေး ကို လုပ်တာ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာ ရှိနေပါရက် မကောင်းတာကိုဘဲ ညွန်းဆို ပြစ်တင်နေရင် ပြသနာ ရဲ့ အဖြေ ထွက်မှာမဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် ပြသနာ အစ ပြုသူ လူ များ ကို ဘဲ စမ်းစစ် ကြည့်ရမှာပါ။
မကောင်းတာ ပြုနေတဲ့ လူများ က ဘာသာရေး ကို ဖျက်ဆီးနေမှု တွေ ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး အမှန်ရအောင် ကာကွယ်ပေးရမှာပါ။
မကောင်းတဲ့ လူ များလာပြီး ကောင်းတဲ့ သူတွေ ထဲ က လဲ ပါးစပ် တွေ ပိတ် နေရင်တော့ ပြသနာလဲ ဘယ်တော့မှ ရှင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
အမှန်တရား နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလဲ ဘယ်တော့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
အမှန်တရား တစ်ခု ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ပုံသေနည်း အတိအကျ မရှိနိုင်တာမို့ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် က နဲနဲလျှော့ပြီး အပေးအယူ မလုပ်နိုင်ရင်လဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဘယ်လိုမှ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အပြန်အလှန် လေးစားတတ်ခြင်း ၊ သူများနေရာ က မစဉ်းစားပေးတတ်ခြင်း၊၊ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် မရှိခြင်း အဲဒါတွေ က ဘဲ လူတွေ အချင်းချင်း ကြားမှာ အမုန်းရန်စ တွေ ဖြစ်နေတော့တာ။
အဲဒါကို သာ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တစ်ယောက်ချင်းစီလဲ ပြန်စစ်ကြည့်ကြပါ။
အတ္တကို မြင်/သိ ရင်တော့ နောက်စိတ်လေး နဲ့ ထိန်းပါ။
လက်မှန်းမှီ သလောက် လဲကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် ကို ထိန်းကြည့်ပါ။
အတ္တကို အတ္တ မှန်း မသိအောင် အသိမဲ့ နေရင်တော့ လဲ “ကံ” (သို့) “ဘုရားသခင်” ကိုသာ ပုံရတော့မလား။
ဒါမှမဟုတ် “ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်တယ်” လို့ ထားလိုက်ရတော့မလား။
ပိုပြီး အရေးကြီးဆုံး က မှန်ကန် တဲ့ ဆင်ခြင် တွေးခေါ်ဉာဏ်ပါတဲ့ ပညာရေးစနစ် ကို ပြန်ရအောင် ဦးစားပေးကြိုးစားရမှာပါ။
အဲဒီနောက်မှာ ဘာလုပ်လုပ် မျက်ကန်းမဟုတ်တော့ဘဲ ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ အသိလေးပါလာမယ် မှန်းတာပါဘဲ။
အခုလဲ ရွှေပြည် ထဲ မြန်မာစာ အတွက် ဇော်ဂျီ နဲ့ ယူနီကုတ် စစ်ခင်းကြတော့မလားဘဲ။
အဲဒီ အရေး ကလဲ ဆယ်စုနှစ်ချီနေပြီ။ မပြီးသေး။
အဲဒါ ဘာသာရေး မဟုတ်နော်။ နည်းပညာမှာ။
အရေးကြီး တဲ့ လိုရင်း အဖြေ ရှာဖို့ ဟို ဘက် ဒီဘက် မညှိဘဲ အလျှော့အတင်း အပေးမယူမလုပ်ဘဲ ကိုယ့် အတ္တအစွယ် တွေ ထုတ်ပြ၊ အပြန်အလှန် အပြစ်တင် နေသမျှ တော့ အလုပ်ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မည်မဟုတ်။
kai says: ဘယ့်နှာ ချောတောငေါ့ပြီး.. ကမ္ဘာနဲ့လာကိုင်ပေါက်နေသလဲ.. အရီးလတ်ရယ်..။
ဟိုမှာ.. ခရူးဆိတ်စစ်ဆက်ဖြစ်အောင်. .ယူအက်စ်က.. အာဏာပါဝါတွေသုံးပြီး.. လက်နှက်ရောင်းဖို့လုပ်ထားတဲ့.. အရှုပ်ထဲဝင်မပါခင်ပါဦးနဲ့..။
“စနစ်ကြောင့်မဟုတ်..။ အတွေးအခေါ်တို့၏ အမြုတေသည်ဘာသာရေး…။”
sorrow says: ..တားတားပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့နဲ့ နဲနဲလွဲနေပုံရတယ်..အရီးလေးရယ်… ကျော်တို့ ခံစားရတယ်..မလုံခြုံဘူး ဆိုတာကိုသိစေယုံပါ..ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဝေဖန်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိသလို..မဝေဖန်ရဲပါဘူး…
ကျော်တို့မလုံခြုံဘူးခံစားရရင်…ဘာသာရေးအစစ်အမှန်နဲ့.Social Scienceကို သိထားတဲ့သူ…ဥပမာ အရီးလေးလိုလူမျိုးတွေလဲ တာဝန်မကင်းလှဘူးမှတ်ပါ… အားမနာတမ်းပြောရရင်..ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့…အရီးလေးလို..ဦးပါလို.လုလုလိုလူမျိုးက ဒီနိုင်ငံမှာလူနည်းစုဗျ….ဆိုတော့ကာ…အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းသွားရမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ… အမှန်သိသူမှာ တာဝန်လဲရှိပါတယ်…
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်တိုင် ခံစား ခဲ့ရပါရောလား မောင်စော ရယ်။
အခုလို ပြောနေတာ ကလဲ အရီး ကိုယ်တိုင် မောင်စော ခံစားရသလိုဘဲ အရင်က စစ် အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ မလုံခြုံ ခဲ့လို့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ထဲ က နေပြီး (အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ မကင်းသော်ငြား)
တိုင်းပြည် တစ်ခု မှာ ပြည်နယ်တိုင်း မကျန် မြို့ရွာ မကျန် လူတန်းစား တိုင်း အခြေခံ လူနေမှုစနစ် တော့ အာမခံခွင့် ရဖို့ စနစ်ပြောင်းဖို့ လိုကြောင်း တတ်နိုင်သမျှ (ကြောက်ကြောက် နဲ့) ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက်လဲ စနစ်ကောင်း တစ်ခု ကို ပြောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံ တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင် ဝိုင်းပေးခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။
ရောင်ခြည်တန်းမြင်ရလုပါပြီ မောင်စော ရယ်။
အချိန် ခဏလေး စောင့်ရင်း တတ်နိုင်သမျှ ကူတွန်း ကြဖို့သာ လိုတော့တာပါ။
မှတ်ချက် – အရီး က ဗုဒ္ဓဘာသာရေး အကြောင်းကို ထဲ ထဲ ဝင်ဝင် မသိကြောင်း ပြောပာထားပြီးပါပြီ။
အခုဟာ က နိုင်ငံရေး သက်သက် ကိုအဖြေ ရှာနိုင်ဖို့ ပြောနေတာပါ။
kai says: အခုဒီနှစ်ပိုင်းထဲပဲ.. ဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ပြုတ်.. လူထွက်ကုန်တာ.. ၁သိန်းကျော်တယ်တဲ့..။
အပျိုကြီးများ..၀မ်းသာကြလော့..။ မြန်မာတွေလည်း.. ၀မ်းသာ..၀မ်းသာ..။
အနည်းဆုံး.. ဘုန်းကြီးတသိန်းအတွက်.. စားဝတ်နေရေး.. လူထုကစိုက်ထုတ်ထားရတဲ့..
စား.. တနှစ် ၁၀၀၀
နေ.. တနှစ်.. ကျောင်းအထွေထွေစရိပ်.. ဒေါ်လာ ၁၀၀၀
ပေါင်း.. တပါး.. တနှစ်ဒေါ်လာ၁၀၀၀။ အပါး ၁သိန်းအတွက်.. ဒေါ်လာ သန်း၂၅၀ သက်သာနေပြီပေါ့…
ဘေးထွက်ကောင်းကျိုးအဖြစ်.. အစွန်းရောက်မြန်မာတွေဖြစ်အောင်… လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမယ့် ဆရာတွေလျှော့…။ ချောင်လို့ ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သူတွေလျှော့.. သာသနာအတွက်တကယ်လုပ်မယ့်သူတွေကျန်..။
.. မြန်မာပြည်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဆီ ဦးတည်နေပါပြီ..။
ဆက်တွန်း.. ဆက်တွန်း…. ကျိန်စာလွတ်အောင်ဆက်တွန်းကြ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ပြောနေတာ ဒီ ဘုန်းကြီး တွေ ဆီမှာဘဲ အမြဲ တမ်း ဘဲ လမ်းဆုံးတယ်။
ကျွန်မ ပြောနေတာ က ဘုန်းကြီး တွေ လူတွေ ခွဲ မနေဘူး။
အရှုပ် ဆို ရှင်းဖို့ဘဲ။
ဒါကို ဘုန်းကြီးရှုပ် တွေချည်း မှာဘဲ မဲ နေလို့ ကတော့ တကဲ့ လက်မဲ မတွေ့ ဘဲ ဒုံရင်းကကို တက်မှာ မဟုတ်။
မြန်မာပြည် ကို ကမ္ဘာ ထဲပြန်ဝင်ဖို့ ကမ္ဘာထဲ ဝင်ကြည့် မပေးလို့ နွားခြေရာခွက် အတွေး တွေထဲ က ထွက်တော့ မှာ မဟုတ်။
kai says: စောင့်ကြည့်ပေါ့…
ဘုန်းကြီးအင်အားက.. အခုရှိတာရဲ့တ၀က်အောက်ကိုကျ.. ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးက.. မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ သင်ကြားပို့ချလာတဲ့တနေ့… အဲဒီနေ့..။
နေ့တိုင်းသိသာမယ်..။ ၁၀နှစ်အတွင်း.. မြန်မာထိပ်တန်းရောက်သွားမယ်..။
ကိုယ်တိုင်အခုထလုပ်.. အခုထူးခြားတာတွေဖြစ်…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: စားရ မချောင်ချိန် ဘယ်သူမှ အဲဒီ ယူနီဖောင်း မဝတ်ဘူး သူကြီး ရေ။
အခုဟာ က အဲ ဒီ လက်ကိုင်ဒုတ် တွေ နဲ့ အချောင်စား သူ တွေ ကြောင့် အခုလို ဖြစ်နေတာ။
သူကြီး အလို အတိုင်း အဲဒီ ယူနီဖောင်းဝတ် တွေကို ဝေဖန်ရရင်လေ
အရင်အစိုးရ လက်ထဲ မှာ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ ယူတာ ခိုး တာ မဟုတ် ဆိုတဲ့ စကား တွေ နဲ့ သာသနာကို ဖျက်ရုံ မက တိုင်းပြည် ကိုပါ ဖျက်ခဲ့တာ။
အဲဒါနဲ့ သူခိုး လူတန်းစား ကြီးစိုးကုန်တာ။
ဒါနဲ့ ဘဲ တိုင်းပြည်လဲ ဖွတ်pဖြစ်ရော။
kai says: အရီးလတ်နဲ့ကျုပ်က အဲဒီမှာအကြီးအကျယ်လွဲတာ..။
ကျုပ်က.. စစ်တပ်အာဏာရှင်ဆိုတာ.. ထေရာဝါဒဘာသာရေးကမွေးပေးလိုက်တာလို့မြင်တယ်.။
အရီးလတ်က.. အာဏာရှင်က.. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ကိုမွေးထုတ်လိုက်တာလို့မြင်တယ်..။
လွတ်လပ်စွာပဲ.. ကွဲလွဲကြပါစို့..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် အာဏာရှင်ကရော သူကြီးမင်းရှင့်။
မြစပဲရိုး says: တကယ်တော့ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ မောင်စော ပြောသလို အကြောက်တရား ခံစားပြီး မလုံခြုံမှု တွေ နဲ့ နေနေ ရတဲ့ ပညာရှင် တွေ အများကြီးပါ။
အသိ တွေထဲ မှာကို မနဲ ပါ။
ကိုယ့်ထက် အများကြီး တော်ကြ၊ တွေးခေါ်နိုင်ကြသူတွေပါ။
ပြောချင်ပေမဲ့ မပြောရဲဘဲ ပါးစပ်ပိတ် နေရတဲ့ သူတွေ အခု ဝင်လာချိန် လေဘယ်လ် မတတ်ကြပါနဲ့။
ဒီအချိန် ဘယ်သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ ပေါင်းလာချိန် လက်ခံနိုင်ဖို့ပါဘဲ။
အပေါ်စီးက ကော်ဇောနီ နဲ့ဝင်လိုရင်တော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့။
kai says: အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် အာဏာရှင်ကရော သူကြီးမင်းရှင့်။
မြန်မာထေရာဝါဒကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တိုင်ခံစား..လေ့လာဖူးလို့.. တပ်အပ်ပြောနိုင်တယ်..။
ခန့်မှန်းရသလောက်တော့.. အစ္စလမ်အစွန်းရောက်က.. ယူအက်စ်က..ဖန်တီးထားတာပဲ..။
ကျန်တာတော့ ဆက်မပြောလို..။ တော်ကြာ.. ကားမောင်းရင် သေနေဦးမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အစ္စလာမ်မစ် တိုင်းပြည်ထဲက အာဖဂန် နစ္စတန် ကိစ္စချောသွားတာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာ အဓိကပါပဲ။ အမေ၇ိကန်တွေက လက်နက်တပ်ပေးခဲ့မိတဲ့ အမှားရှိခဲ့ပေမယ့် တကယ့်လက်သည်အစစ်က ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာပါ။ ကျန်တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဒီမိုရဲ့ အရသာ စစ်စစ် ရှိကိုမရှိပါဘူး။ အင်မတန် ချမ်းသာတဲ့ အစ္စလာမ် တိုင်းပြည် တွေထဲ ဒီမိုအရသာ စစ်စစ် ရှိရင် လက်တစ်ဖက်စာ မပြည့်ဘူး။
မြစပဲရိုး says: ကဲပါသူကြီး ရာ။
ကျွန်မတို့ စကားရည်လုပွဲ လုပ်ကြရအောင်။
မဟုတ်ရင် ကြက်ဥ နဲ့ကြက်မ လို ပြီးတော့ မှာမဟုတ်။
“အာဏာရှင် ဘယ်က ဖြစ်လဲ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့။
James Fallon – The Mind ofaDictator
မြစပဲရိုး says: Now … your turn my dear! :-)))))
kai says: ပြောစရာမရှိ… ဒီရွာမှာ တောက်လျှောက်ရေးခဲ့တာချည်းဖြစ်ပါ၏။
လောလောဆယ်တော့… ဒေါ်စုအပါအ၀င်.. အစိုးရသစ်က.. အဲဒီ ထေရာဝါဒကျောက်တောင်ကို.. ကျော်ဖို့တော်တော်လုပ်ရလိမ့်ဦးမယ်..။
သူ့စရိပ်နဲ့သူတို့.. ယူနီဖောင်းတွေ.. မျက်နှာဖုံးတွေ.. ချွတ်ချနေတော့လေ..။
သူတို့ကို..လူထွက်တွေကို.. လူသားဆန်ဆန်.. ပုံမှန်ဘ၀ပြန်ရောက်ဖို့.. တာဝန်ယူ..တာဝန်သိ… အချောင်စားဘ၀ကလွတ်စေဖို့.. မိန်းမများမှာ..အထူးတာဝန်ရှိပါ၏။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ပေးလိုက်ပါ..။
လူလောကအကြောင်း.. လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်း.. သိနားလည်သွားမယ်လို့… ထင်မိပါ၏..ထင်ပါ၏။။ ဘုရား၊ဘုရား.. လူပျိုဘုရား.. မရှိ…တဲ့..။ ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့.. ဥပဒေသ…။
ဘုန်းကြီး.. ဘုန်းကြီး.. လူပျိုဘုန်းကြီးလည်း.. မရှိသင့်…။
မြစပဲရိုး says: ခရစ်ယာန် ဘာသာထဲမှာ တရားဟောဆရာများ မိန်းမယူလို့ ရတာ ရှိသလို၊ ယူလို့ မရတာလဲ ရှိပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ သူတို့ ဘာသာရေး က ဘုရားကိုးကွယ် မှုပါ။
လူတွေ ရဲ့ အထက်မှာ စောင့်ကြည့်တဲ့ ဘုရားရှိနေတော့ တရားနာသူတွေ ရဲ့ စံနမူနာထားတာဟာ အကြွင်းမဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ က တော့ လက်တွေ့ကျင့်ကြံရတဲ့ တရားဖြစ်တာမို့ အဲဒီ တရားကို ပြသ မဲ့ သူဟာ တရားနာခံမဲ့ သူ တွေရဲ့ စံနမူနာဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါကြောင့် တရားပြသူ ဟာ ဖြစ်နိုင်သ၍ အပြစ်ကင်းတဲ့။ ကိလေသာကင်းတဲ့၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန်မာန ကင်းတဲ့၊ တွယ်ငြိမှု ကင်းတဲ့၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ကို လက်လွှတ်ထားတဲ့ သူဖြစ်ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် ရဟန်းပြုပြီး လောကီ အမှုတွေ ကို စွန့်လွှတ်ထားလိုက်ကြောင် ပြသ ကြခြင်း လို့ ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဆိုတာက အားလုံး ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးမှ တရားကျင့်တာပါ။ တရားကျင့်ရင်း မိန်းမယူတာမဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် သင်္ကန်းရုံ ပြီး လူတွေ လို လုပ်နေရင်တော့ အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ ခလောက်။
ကျွန်မ သာဆို အဲဒီသူ ဟောတာတွေ ကို နာယူမည်မဟုတ်။
တရား ကို ကန်တော့တာမို့ တရားမရှိရင် ဘာကို ကန်တော့ရမည်နည်း။
kai says: လမ်းကြောင်းတည့်လာပြီ..။
လူကိုလူက.. ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ..(ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ) ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျှော့.. ကန်တော့ခြင်းမပြုရ..
ဒါက.. Rule No 1
Rule No 2.. ဥပဒေသ ၁ကိုလိုက်နာပြီး… နောက်ကနေလာသမျှတွေက.. လာခြင်းကောင်းတာတွေချည်းဖြစ်မယ်..။ ဘ၀တွေပြောင်းကုန်မယ်..။
အမြင်တွေပွင့်ကုန်မယ်…။ ၀ါးလုံးခေါင်း.. ရေတွင်း.. ထဲကထွက်ကုန်မယ်..
( မြန်မာ ထေရာဝါဒသမားများအတွက်သာ..။ )
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျေးဇူးပါ အရီးလာဘ်၊ အခုဆွေးနွေးချက်လေးက ကိုးကားဆရာ အသိအမြင် ပွားစေတယ်။ ကြော်အရီးလာဘ်ကို ကြောင်ခမ လျှာထူး ပေးအပ်လိုက်ပါပြီ။ ငါကွ…
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: နောင်ဘဝဆိုတာ မယုံရင် Animal Planet နဲ့ Net Geo ကြည့် ကံကံ၏ အကျိုးလည်း အဲ့ထဲပါတယ် ….
Post ရော cmt တွေရော အနှစ်သာရကျတယ် တခုပဲ …. သိရင်း မြင်ရင်းထက် သိပြ မြင်ပြနေတဲ့ အပိုင်းတွေ များနေသလိုပ
မြစပဲရိုး says: စိန်
မြ တို့ ကို ဝင် ဆူ သွားတာလား ဟင်။
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: တခုခု လွဲနေသလို ခံစားရတယ် အရီးလတ် …. တကယ်ပါ
CharTooLan says: အမလေးးးး များလိုက်းဒဲ့ဇဂါး
စတာဘာ စတာဘာ :P